ကညန နံပါတ်ပြား အသုံးပြုခြင်း မရှိသော ယာဉ်မောင်းများကို ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်နှစ် ပိတ်မည်
အပ်ကားများ ရှားပါးလာခြင်းကြောင့် ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံမှုဌာနတွင်နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ကားအစီးရေ လေးဆယ် ၀န်းကျင်သာ လာရောက်အပ်နှံ
အမေရိကန် ချက်ပလက်ကားဖြင့် လေဆိပ်နှင့် မြို့တွင်းပြေးဆွဲမှုစတင်
ရန်ကုန်တိုင်း၌ပင် သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁၂)မျိုးလျှောက်ထားနိုင်တော့မည်
ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် မီးပွိုင့်ထိန်းချုပ်ဆင်ဆာစနစ်ကြောင့် ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်ကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်း
ယခုနှစ်ထုတ် Honda Fit Hybrid ကားများ ပြန်လည်သိမ်းဆည်း
၂၀၁၅ ခုနှစ်မော်ဒယ် Honda Civic မိတ်ဆက်
သုံးဘီး မော်တော်ယာဉ်များ အပ်နှံခွင့်ပေးခဲ့ပါက သုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်များသာ ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဟုဆို
‘အ’ အက္ခရာအပ်နှံမှု တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း မူဝါဒသစ် ထွက်ပေါ်မလာသေး
၂၀၁၄ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ယာဉ်/ယန္တရား လျှောက်ထားမှုစာရင်း၌ Mini Bus နှင့် Mini Truck အများဆုံးပါဝင်
၆ဂ/ . . . .နှင့် အထက် ကားများကို ကားသစ်များနှင့် လဲလှယ်ပေးမည်
စတေကာကပ် မောင်းနှင်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် က.ည.န မှတရားဝင် ထုတ်ပေးထားသော ယာဉ်နံပါတ်ပြား တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်း မရှိဘဲ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော နံပါတ်ပြားများ အသုံးပြုပြီး မောင်းနှင်သွားလာနေသော ယာဉ်မောင်းများကို ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်နှစ်ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ရဲမှူးကြီး ကျော်ထွေးက ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူများ အလွန်များပြားလာတဲ့အတွက် အခုလို အရေးယူရတာ ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခု စီမံချက်ဒဏ်ငွေဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေအရ ဒဏ်ငွေ ကျပ်၁၅၀၀ ကနေ ၂၀၀၀ ထိပဲ ပေးဆောင်ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ယာဉ်မောင်းတွေ၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ စည်းကမ်းပိုင်းကို လိုက်နာမှု အားနည်းလာတယ်။ စည်းကမ်းဖောက် ပြီးတော့ ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁၅၀၀ ကို လွယ်လွယ် ကူကူပေးဆောင်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာဖို့ စတေကာကပ်ပြီးမောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေနဲ့ ကားနံပါတ်ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး မောင်းနှင်နေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကို အနည်းဆုံး ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ခြောက်လကနေ တစ်နှစ်ထိ ပိတ်သိမ်းအရေးယူသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်မှုမှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးလျက်ရှိပြီး ယခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။ အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတားကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစီမံကိန်းကြီးအဖွဲ့-၅ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်တွင် စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနိုင်ရန် လျာထားကြောင်း၊ တံတားတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများမှာ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးလျက်ရှိကာ လက်ရှိတွင် တံတားသံဘောင် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ တံတားတည်ဆောက်မှုက ခန့်မှန်းထားတာထက် ပြီးစီးမှုမြန်တယ်လို့ ပြောရမယ်၊ ဒီကြားထဲမှာ ဆောင်ရွက်မှု နှေးသွားရင်တော့ ဇွန်လလောက်မှပဲ ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနိုင်မယ်၊ လက်ရှိအနေအထားအရ ဆိုရင် ဧပြီလလောက်မှာ ဖွင့်နိုင်မှာပါ၊ ဘုရင့်နောင်ခုံးကျော်တံတား ဖွင့်ပြီးတာတောင် အပေါ်လွှာတံတားက ကျပ်နေတုန်းပဲ၊ ဒါက မြစ်ကူးတံတား မပြီးသေးလို့၊ မြစ်ကူး တံတားပြီးရင်တော့ တော်တော် အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုမြို့တော်စည်ပင်၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း တံတား)မှ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးစည်သူလွင်က ပြောသည်။
ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ် ကူးတံတား တည်ဆောက်မှုကြောင့် ဘုရင့်နောင် အပေါ်လွှာတံတားပေါ်တွင် ကားကျပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ထပ်ခုံးကျော်တံတား ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုပေမဲ့ လှိုင်သာယာဘက်ကို သွားတဲ့ကားက များနေတော့ တံတားပေါ်မှာ နည်းနည်း ကျပ်နေတယ်၊ လှိုင်သာယာဘက်သွားတဲ့ ကားက အရင်နှစ်ထက် ခုနစ်ဆ၊ ရှစ်ဆလောက် များလာတယ်၊ မြစ်ကူးတံတားပြီးရင်တော့ တော်တော် အဆင်ပြေမှာပါ၊ လက်ရှိ ကျပ်နေတာက သီရိမွန်နဲ့ ဘုရင့်နောင်လမ်းကြားမှာပါ၊ လမ်းခင်းနေတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်ဟု ဘုရင့်နောင် အဝေးပြေးကုန်စည်ဒိုင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်က ၎င်း၏ အမြင်ကို ပြောပြသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်ဘက်ကမ်းနှင့် လှိုင်သာယာဘက်ကမ်းကို ချိတ်ဆက်ပေးမည့် ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတားကြီးမှာ ယာဉ်သွားလမ်း လေးလမ်းပါရှိပြီး ပင်မ တံတား အရှည်မှာ ၁ç၆၂၈ ဒသမ ၃ ပေနှင့် ခံနိုင်ဝန်အလေးချိန် ၇၅ တန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ရေလမ်း ကင်းလွတ်ခွင့် အမြင့်ပေ ၃၆ ပေရှိကာ အဆိုပါတံတားကို ငွေကျပ်သုံးဆယ် ဘီလျံခန့် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အပ်ကားများ ရှားပါးလာခြင်းကြောင့် အပ်နှံမှု လျော့ကျလာခဲ့ပြီး ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံမှုဌာနတွင် နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ကားအစီးရေ လေးဆယ် ၀န်းကျင်သာ လာရောက် အပ်နှံလျက်ရှိကြောင်း ‘မြင်သာ ကညနရုံး’ မှ သိရသည်။ အပ်နှံဆဲဖြစ်သည့် ‘အ’အက္ခရာ ကားများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ အစီးရေ ၄,၇၅၀ ရှိရာ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက် အထိ ၃,၄၀၈ စီး အပ်နှံခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အစီးရေ ၁,၃၀၀ ကျော်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။ ထို့အတူ အပ်နှံရန်ကျန်ရှိသည့် ‘လ၊ သ’ အက္ခရာကားများသည်လည်း အပ်နှံမှုပြီးပြတ်ရန် အနည်းငယ်သာ လိုတော့သည့်အတွက် ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံမှုဌာနတွင် အက္ခရာအစုံမှ ကားအစီးရေ ပျမ်းမျှ လေးဆယ် ၀န်းကျင်သာ အပ်နှံမှုရှိနေပြီး အပ်နှံမှုလျော့ကျလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှု စာရင်းများအရ ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်အထိ လူစီးယာဉ် စုစုပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော်၊ ဘတ်စ်ကား အစီးရေ စုစုပေါင်း ကိုးရာကျော်နှင့် ထရပ်ကား အစီးရေ စုစုပေါင်း ၂,၅၀၀ ကျော် အပ်နှံခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အက္ခရာစဉ်အလိုက် အပ်နှံမှုများအရ ‘အ’အက္ခရာ ၃,၄၀၉ စီး၊ ‘သ’ အက္ခရာ ၄,၆၈၂ စီးနှင့် ‘လ’အက္ခရာ ၃,၉၁၈ စီး အပ်နှံခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ‘ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန’ မှ သိရသည်။ ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းများ အပ်နှံမှု လျော့ကျလာသော်လည်း အပ်နှံမှုပေါ်လစီ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးခြင်းကြောင့် အပ်ကားများ၏ စလစ်ဈေးများမှာ ဈေးတန့်နေခဲ့ကာ ‘လ၊ သ၊ အ’အမည်ပေါက် ကားဟောင်း စလစ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၉၅ သိန်းဝန်းကျင်၊ တက္ကစီ စလစ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၆၇ သိန်းဝန်းကျင် ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း ကား ၀ယ်/ရောင်းများထံမှ သိရသည်။
မိုဒယ်မြင့်ကားများ များလာစေရန်အတွက် တင်သွင်းခွင့်ပြု Model Year များကို တစ်နှစ်လျှင် မိုဒယ် ၂ နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ခုန်တက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ‘စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန’မှ သိရသည်။ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနည်းတူ နှစ်အကန့်အသတ် အနည်းငယ်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပေးပြီး မိုဒယ်မြင့်ကားများ များလာစေရန်အတွက် လာမည့်နှစ်များ၌ Model Year၂ နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ခုန်ကူးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ပြောသည်။ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကားတင်သွင်းခွင့် မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီနှစ်မှာ ၁၉၉၇ မိုဒယ်ကနေ ၂၀၀၀ မိုဒယ်ကို ခုန်ကူးခဲ့သလို လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာလည်း ၂၀၀၀ မိုဒယ်ကနေ ၂၀၀၃ မိုဒယ်ကို ခုန်ကူးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်၊ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်မှာ ကားတင်သွင်းတယ်ဆိုတာ ငါးနှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားပဲ သင့်တော်ပါတယ်၊ လုပ်ငန်း သုံးယာဉ်တွေအတွက်ကတော့ ၁၀ နှစ်အတွင်းဆိုရင် သင့်တော်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုဒယ်မြင့် ကားတွေ ၀င်ရောက်လာဖို့အတွက် တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မိုဒယ်တွေ ခုန် ကူးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လမ်းအနေအထားနဲ့ စက်သုံးဆီ အရည်အသွေးကို တွက်ချက်ပြီး တစ်နှစ်မှာ မိုဒယ် ဘယ်လောက် ခုန်ကူးမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားတွက်ချက် နေပါ တယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော CIF တန်ဖိုးအသစ်တွင် ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးလဲလှယ်မှုအတွက် လူစီးယာဉ်များကို ၂၀၀၀ မိုဒယ်မှ ၂၀၀၈ မိုဒယ်အတွင်း၊ တစ်ဦးချင်း ပါမစ်ဖြင့် တင်သွင်းသော လူစီးယာဉ်များကို ၂၀၀၉ မိုဒယ်မှ ၂၀၁၃ မိုဒယ်အတွင်း၊ ကုန်တင်ယာဉ်များ ကို ၂၀၀၄ မိုဒယ်မှ ၂၀၁၄ မိုဒယ်အတွင်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း၌ အဝေးပြေးယာဉ်များဆိုက်ရောက် နိုင်ရန် Arrival ၀င်းတည်ဆောက်၍ ခရီးသည်များကို ၀န်ဆောင်မှုပေး လျက်ရှိရာ ယခုလပိုင်းတွင် Arrival ၀င်း၌ ယာဉ်ဝင်ရောက်မှုလျော့နည်း လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤကဲ့သို့ အောင်မင်္ဂလာအဝေး ပြေးယာဉ်များဆိုက်ရောက်နိုင်ရန် အတွက် Arrival စခန်းကို (၂၀၁၃) ခုနှစ် (၈) လပိုင်း၌ အစမ်းဖွင့်ခဲ့ပြီး (၉) လပိုင်းမှစတင်၍ တရားဝင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့သည့် (၉) လပိုင်းတွင် Arrival ၀င်းသို့ ယာဉ်အစီးရေ တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး (၃၉၉) စီးအထိဝင်ရောက် ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် တစ်ရက် ကို (၁၈၈) စီးသာဝင်ရောက်ဆိုက် ကပ်တော့ကြောင်း အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး Arrival ၀န်းမှ တာဝန်ရှိ သူ၏ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ယာဉ်အစီးရေလျော့ နည်းသွားရခြင်းမှာ ခြောက်လမ်းသွား နှင့် အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးပြင်နေ သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်း ၎င်းင်းမှဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ သည်။ အဆိုပါ အောင်မင်္ဂလာအဝေး ပြေး Arrival ၀င်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်အားMYINT & PAING Co., Ltd. မှ BOT စနစ်ဖြင့် (၁၇) နှစ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဝင်း အတွင်း ဆိုက်ရောက်ခကိုကားကြီး တစ်စီး (၅၀၀) ကျပ်၊ ကားလေး တက္ကစီ (၂၀၀) ကျပ်တို့ဖြင့်အသီး သီးကောက်ခံပြီး Public နံပါတ် အနက်ကို ငွေကြေးကောက်ခံခြင်း မပြုကြောင်းသိရသည်။ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးယာဉ် Arrival ၀င်းသည် တစ်ရက်လျှင် ခန့် မှန်းခြေ ခရီးသည် (၆၀၀၀) ကျော်ကို ၀န်ဆောင်မှုများပေးနေကြောင်းသိရှိရ သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အဝေးပြေးယာဉ် များသည် Arrival တွင်ဆိုက်ရောက် ပါက ခရီးသည်များသွားလာမှု လွယ် ကူစေရန် City Bus နှင့် တက္ကစီများ ကိုလည်း အဆင်သင့်ထားပေးထား ကြောင်းသိရသည်။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး Arrival စခန်းကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း ကြောင့် နိုင်ငံတကာကဲ့သို့ Arrival စခန်းသီးသန့်တည်ရှိပြီး ယခင်ကလို တက္ကစီများနောက်မှ လိုက်လာခြင်း မရှိသည့်အတွက် ခရီးသည်များအဆင် ပြေစွာသွားလာနိုင်ပြီး ယာဉ်ကြောပိတ် ဆို့မှုကို အနည်းငယ်လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
၀ှီးချဲ(လ်) (၆) စီးတင်ဆောင် နိုင်သော အမေရိကန်ချက်ပလက်ကား ဖြင့် လေဆိပ်နှင့် မြို့တွင်းပြေးဆွဲမှု အား Airport Shuttle ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၀ှီးချဲ(လ်) (၆) စီးတင်ဆောင်နိုင်ပြီး လူချည်းသက်သက် သာဆိုပါက (၁၈) ယောက်ခန့်စီးနင်း နိုင်သော ချက်ပလက်ကားဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူ ဦးကျော်ကျော် ကပြောပြခဲ့သည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းဝေဒနာရှင် များအတွက် ရည်ရွယ်ကာ အလွယ်တကူစီးနင်းနိုင်ရန် ၀ှီးချဲ(လ်)ပါ တင်ဆောင် နိုင်သည့် အဆိုပါ ကားဖြင့် ပြေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကာ လက်ရှိ အချိန်တွင် တစ်စီးတည်းသာ ပြေးဆွဲနေပြီး အစီးရေတိုးချဲ့ ပြေးဆွဲသွားရန် ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဓိကမသွားနိုင် မလာနိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ မသန်စွမ်းတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ၀ှီးချဲ(လ်) ကိုတွန်းတဲ့သူပါ အဆင်ပြေ အောင် ဟိုက်ဒြောလစ်တွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ၀ှီးချဲ(လ်)ကို မစရာမလိုဘဲ တွန်းသွားလို့ရအောင် လုပ်ထားတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ မိသားစုအရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီးယူပါတယ်။ အခု ရန်ကုန် မြို့ထဲမှာ ၀ှီးချဲ(လ်)တွေပါသွားလို့ရ အောင် လမ်းတွေခင်းမယ် လို့သိထားတယ်။ အဲ့လိုတွေပါရှိလာရင်တော့ ပို ကောင်းတာပေါ့လို့ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် ကပြောပြခဲ့သည်။ Airpot Shuttle အနေဖြင့် (၇) ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် မသန်စွမ်း ဆီးဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်သော မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ အတွက်ပါ ကူညီအားဖြည့်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
(၂၀၁၄) ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်မှစတင်၍ ပစ္စည်းအမျိုးအမည် (၁၂) မျိုးအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကူးသန်းရောင်း ၀ယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ သွင်းကုန် ဌာနခွဲ၌ သွင်းကုန်လိုင်စင်များ အဖြစ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က သွင်းကုန်လိုင်စင်များကို နေပြည်တော်တွင်သာ လိုင်စင်လျှောက် ထားရပြီး ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီတွင် ရန်ကုန်၌ လျှောက်ထားခွင့် ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်ပြုလိုက်သည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား များမှာ ကားအပိုပစ္စည်းများ၊ တာယာအမျိုးမျိုး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်း၊ စက်ဆီ၊ ချောဆီ၊ စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်းများ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ မီးစက်၊ ရုံးသုံးကိရိယာ၊ ဂျင်နရေတာ စသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုပစ္စည်းများထဲတွင် ကားတာယာများမှာ ယခင်က လိုင်စင်လျှောက်ထား စရာမလိုဘဲ တင်သွင်းသည့်အခါ၌သာ အခွန်ပေးဆောင်သွင်းရပြီး ယခုအချိန် တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ဖြင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ တာယာတွေက အရင်က လိုင်စင်လျှောက်စရာမလိုဘဲ အခွန်ဆောင်ပြီးပဲသွင်းရတာ။ အခုက ရန်ကုန်မှာပဲ သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြန် လျှောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ဒါက တာယာတွေဝင်ရောက်လာတာကို ထိန်းချုပ် တာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးမီတဲ့ တာယာတွေ ပိုပြီး တင်သွင်းလာနိုင်ပါတယ် လို့ ကားတာယာများတင်သွင်း ရောင်းချသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း ပြောပြခဲ့သည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ် နေသော ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံတွင် ယခင်က ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း ယခုအခါ မီးပွိုင့်ထိန်းချုပ် ဆင်ဆာတပ်ဆင် လိုက်ခြင်းကြောင့် ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်ကိုခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေးမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ် ဦးကပြောကြားခဲ့သည်။ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံတွင် တပ်ဆင် ထားသော မီးပွိုင့်ထိန်းချုပ်ဆင်ဆာ စနစ်သည် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုပေါ် မူတည်၍ ထိန်းချုပ်ပေးသည့်စနစ်ဖြစ် သောကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်နေ ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အတွက် ခုံး ကျော်တံတားတည်ဆောက်မည့် အစီ အစဉ်ကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ တွင် မီးပွိုင့်လေးခု တပ်ဆင်ထားပြီး ဆင်ဆာစနစ်သည် မီးပွိုင့်တစ်ခုတွင် ကင်မရာတစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ထားပေး ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကင်မရာများ သည် မီးပွိုင့်၏ဂရပ်မျဉ်းမှ မီတာ (၃၀) အကွာအဝေးထိရှိသော ယာဉ် များကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ယာဉ်ကြော ရှင်းလင်းပေးသည့်စနစ်တွင် Manual နှင့် Auto ခလုတ်များပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဟွန်ဒါကုမ္ဗဏီက ၂ဝရက်နေ့မှာ အင်ဂျင်ကိုထိန်းချုပ်သော ပရိုဂရမ်(program)မှာ ချွတ်ယွင်းချက်များ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အသေးစား Fit Hybrid (HV) ကား အရေအတွက် ၃၆,၁ဝဝစီး (ယခုနှစ် (၇)လပိုင်းမှ (၁၂)လ ပိုင်းအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ကားများ) ကို Recall (ပြန်လည်သိမ်းစည်းခြင်းနှင့် အခမဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်း) ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန် ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ဌာနသို့စာပို့လိုက်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဟွန်ဒါကုမ္ဗဏီသို့၉လပိုင်းနောက်ပိုင်း ယင်းပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ ၃၆၂ကြိမ် အကြောင်းကြား ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရရှိထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်တိုက်ခိုက် ပျက်စီးမှု ပြဿနာ များကိုတော့ယခုအချိန်အထိ မရရှိသေးကြောင်းလဲ ပြောကြားထားပါတယ်။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာနမှ ပြောဆိုချက်အရ အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာပိုင်းကို ထိန်းချုပ်သော စနစ်ရဲ့ပရိုဂရမ်မှာ ပြဿနာရှိတာဖြစ်ပြီး အရှိန်နဲနဲနှင့် မောင်းနှင်စဉ် အင်ဂျင်ရပ်တန့်သွားခြင်းပြုပြင်ရန်(故障) ဆိုသော မီးများလင်းလာ၍ မောင်းနှင်လို့မရနိုင်တာမျိုး ရှိနိုင်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်သို့တင်သွင်းနေသော ကားအတော်များများက နှောင်းပိုင်းကားများ ဖြစ်သည့်အတွက် အထွေအထူး လုပ်ဆောင်စရာများ မလိုအပ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကားအမျိုးအစား - Honda Fit Hybrid-(HV)
ထုတ်လုပ်ကာလ - 07/2013 မှ 12/2013
အရည်အတွက် -- 36,100
၂၀၁၅ ခုနှစ်မော်ဒယ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Honda Civic ကို ယခုလို မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ Prototype အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်နေမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်အရွယ် ၂ လီတာ ရှိပြီး ဆလင်ဒါ လေးလုံးပူး V အင်ဂျင်ကို အသုံးပြု တပ်ဆင် ထားပါတယ်။ မြင်းကောင် ရေအား ထုတ်လုပ်မှု ၂၈၀ ဝန်းကျင် ရှိပြီး Euro6mission standard နဲ့ လျော်ညီတဲ့ မီးခိုးထုတ် စနစ် ဖြစ်ကြောင်း ဆို ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လျော်ညီ ကိုက်ညီစေမယ့် ကား ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဟိုင်းဘရစ် ဗားရှင်းလည်း ထုတ်လုပ် အုံးမှာပါ။ အမြန်ဆုံး မောင်းနှင်နိုင်မှု Speed က တစ်နာရီ ၁၂၄ မိုင် ဝန်းကျင် အထိ ရှိပါတယ်။ နောက်ဘက် Hatchback ပါ တံခါး ငါးပေါက် hatchback ကား ဖြစ်ပြီး Honda insight နဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင် ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မော်ဒယ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကားကို ၂၀၁၄ နှစ်လယ်နောင်းပိုင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းချ နိုင်ရန် မျော်မှန်းထားကြောင်း သိရ ပါတယ်။
သုံးဘီး မော်တော်ယာဉ်များ အပ်နှံခွင့်ပေးခဲ့ပါက အမျိုးတူ သုံးဘီး မော်တော်ယာဉ်များကိုသာ ပြန်လည် တင်သွင်းခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာနက ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်များကို တစ်ဆင့်ချင်း အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့ရာ သုံးဘီး မော်တော်ယာဉ်များ အသုံးပြုနေသော မန္တလေးမြို့နှင့် အခြားနယ် မြို့များ၌ သုံးဘီးယာဉ်များ အပ်နှံခွင့်ပေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သုံးဘီးယာဉ်များ အပ်နှံခွင့်ပြုမည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက “ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလလောက်က ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့ သုံးဘီး ယာဉ်အစီးရေကို ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်၊ စာရင်းကောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အပ်မယ်ဆိုပြီး ယူဆနေပါတယ်၊ ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံပြီး အစား ထိုးယာဉ် ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့် ပြုတဲ့နေရာမှာ ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်၊ Light Truck အုပ်စုအပ်ရင် Light Truck ပဲ ပြန်သွင်းရမယ်၊ လူစီးယာဉ်အပ်ရင် လူစီးယာဉ်ပဲ ပြန်သွင်းရမယ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်အပ်ရင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ပဲ ပြန်သွင်းရမယ်၊ အငှားယာဉ်အပ်ရင် အငှားယာဉ်ပဲ ပြန်သွင်းရမယ်၊ သုံးဘီးယာဉ်အပ်ရင် သုံးဘီးယာဉ်ကိုပဲ ပြန်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် သုံးဘီးယာဉ်တွေကို အပ်နှံခွင့်ပေးခဲ့ရင်တောင် သုံးဘီး ယာဉ်ပဲ ပြန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့၌ သုံးဘီးယာဉ်များ အပ်နှံခွင့်ပေးမည်ဆိုသော သတင်းများအပေါ် ကားဝယ်/ ရောင်း တစ်ဦးကလည်း “သုံးဘီးယာဉ်တွေကို ၀ယ်/ရောင်းတွေကတော့ မ၀ယ်ကြပါဘူး၊ သုံးဘီး ယာဉ်ပိုင်ရှင်တချို့က နိုင်ငံတော်ကို နှစ်ငါးဆယ်လောက် အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့တဲ့ ဒီကားတွေကို အပ်နှံခွင့် ပြုပေးပါဆိုပြီး သမ္မတကို စာ တင်ထားပါတယ်၊ ဒါကို စီးပွားရေးသမားတွေက သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ သုံးဘီးယာဉ်တွေကို အမြတ်တင်ပြီး ပြန်လည် ထုတ်ရောင်းကြဖို့အတွက် ကောလာဟလသတင်းတွေ ထုတ်ပြန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ကားအတွင်းခန်းပစ္စည်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ပျောက်ရှမှုဖြစ်ပေါ်လျှင် ဆိပ်ကမ်းက Inspection တောင်းပြီး စစ်ဆေးနေခြင်းသည် မှားယွင်းသည့်လုပ်ရပ်ဟု ကားတင်သွင်းသူများက ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆိပ်ကမ်း၌ ပစ္စည်းအပျောက်အရှများ ရှိခဲ့ပါက Complaint တက်သည့်အခါတွင် တာဝန်ရှိသူများက ဂျပန်ဘက်မှ Inspection တောင်းပြီး စစ်ဆေးမှုမှာ သင့်တော်မှုမရှိကြောင်း ကားတင်သွင်းသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဆိပ်ကမ်းမှာ စီမံချက်နဲ့ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထားပေမဲ့ ပစ္စည်းပျောက်ရှမှုက အနည်းနဲ့အများ ရှိနေတုန်းပါပဲ၊ ပစ္စည်းပျောက်လို့ Complaint တက်တဲ့အခါမှာ Inspection ကို တောင်းပါတယ်၊ ကားတစ်စီးမှာ ပစ္စည်းစုံတယ်ဆိုရင် Inspection မှာ ဘာမှပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကို ဆိပ်ကမ်းက ကား တစ်စီးမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းကို တောင်းပါတယ်၊ ကားတစ်စီးမှာ ပါဝင်တဲ့ Accessory က အများကြီးပါပဲ၊ ကားအတွင်းခန်းမှာဆိုရင် Accessory က အခု ခြောက်ဆယ် လောက်ပါပါတယ်၊ ဥပမာ-ကား တစ်စီးကို ဂီယာဘုသီးပါမှ မောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကို Inspection မှာ ဂီယာဘုသီးပါတယ်လို့တော့ ထည့်မရေးထားဘူး၊ မပါမှ မပါဘူးလို့ရေးတာပါ၊ ဒါကြောင့် ကားအတွင်းခန်းအားလုံးရဲ့ List ကို တောင်းတဲ့အခါ အခက်တွေ့ရပါတယ်၊ တကယ်လို့ ဂျပန်ဆိပ် ကမ်းဘက်က ဓာတ်ပုံပြရင်လည်း ဆိပ်ကမ်းအနေနဲ့ ဒီဓာတ်ပုံအပေါ် မှာ ယုံကြည်မှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းပျောက်လို့ Complaint တက်တဲ့အခါ ဂျပန်ဘက်က ဘာပါသလဲ ဆိုတဲ့စာရင်းကို တောင်းတာဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးဝယ်ပြီ ဆိုကတည်းက အကုန်လုံး ပါပါတယ်၊ မပါဘူးဆိုရင် Auction မှာကတည်းက ဘယ်ပစ္စည်း မပါဘူးဆိုတာ ပြထား ပါတယ်”ဟု Future Auto မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုဇေယျာစိုးက ၎င်း၏အမြင်ကို သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေ ဖြင့် ‘အ’ အက္ခရာကားများ အပ်နှံမှုသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သွား ပြီဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှု ပေါ်လစီသစ်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်နိုင်ဦးမည် မ ဟုတ်သေးကြောင်း ‘ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန’ မှ သိရသည်။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှု ပေါ်လစီ အရ အပ်နှံဆဲအက္ခရာကား အရေအတွက်သည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်လွန်ပါက နောက်ဆက်တွဲ အက္ခရာတစ်ခုကို အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့ရာ ‘အ’ အက္ခရာကားများ၏ အပ်နှံမှုသည် ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီသွားပြီ ဖြစ်သည်။ အက္ခရာ တစ်ခုချင်းစီတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် အစီးရေ ၈,၈၀၀ ၀န်းကျင်ရှိရာ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့သော ‘အ’ အက္ခရာ ကားများမှာ ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်အထိ အစီးရေ ၅,၁၀၀ ကျော် အပ်နှံခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ‘နေပြည်တော် ကညန’မှ သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း၌ ‘အ’ အက္ခရာအစီးရေ ၄,၇၅၀ ရှိရာတွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်အထိ အစီးရေ ၃,၆၃၁ စီး အပ်နှံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ‘အ’ အက္ခရာကားများ အပ်နှံမှုသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အနေဖြင့် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှု ပေါ်လစီသစ် ထွက်ပေါ်မလာသေးသောကြောင့် ကားဟောင်းစလစ် ဈေးများလည်း တန့်နေကြောင်း ကားတင်သွင်းသူများထံမှ သိရသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော စလစ်ဈေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကားဝယ်/ရောင်း တစ်ဦးက “ကားဟောင်းစလစ်ဈေးတွေ ၉၅ သိန်းဝန်းကျင်မှာ တန့်နေ တာ တစ်လကျော် ကြာသွားပါပြီ၊ ဒီလကုန်အထိ ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံမှု ပေါ်လစီအသစ် ထွက်ပေါ်မလာခဲ့ရင်တော့ စလစ်ဈေးက သိန်းတစ်ရာကျော်အထိ မြင့်တက်သွားဖို့ရှိပါတယ်၊ ‘အ’ အက္ခရာ ပြီးရင် ‘၁က’ ကားတွေကိုပဲ ခေါ်မလား၊ နှစ် နှစ်ဆယ်ကျော် ကားတွေကိုပဲ ခေါ်မလားဆိုတာ မသိရတဲ့အတွက် လုပ်ရကိုင်ရ ကျပ်နေပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
GTR Media Co.,Ltd မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နွေဦးအကြိုကားပြပွဲနှင့် ကုန်စည်ပြပွဲကြီးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ ငါးရက်တိုင်တိုင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကန်တော်ကြီး၊ မျှော်စင်ကျွန်းတွင် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းပြပွဲကို နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကားနှင့်ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ၊ အထွေထွေလူသုံးကုန် ပစ္စည်းများကို ပြခန်းပေါင်း ခြောက်ဆယ် ၀န်းကျင်ဖြင့် ပြသရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Car Showroom အကျယ်အ၀န်းရှိ မော်တော်ယာဉ်ပြခန်းပေါင်း ခြောက်ခန်းတွင် ဂျပန်ကား၊ ကိုရီးယား ကားများအပြင် အခြားကားအမျိုး အစားများစွာကို ပြသရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် ပြိုင်ကား အပိုပစ္စည်းများ၊ ကားအလှဆင် ပစ္စည်းများ၊ ကားဘက်ထရီများ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့် စက်ဆီ၊ ချောဆီများ၊ တာယာနှင့် အလွိုင်းများ၊ ကားနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ စားသောက်ကုန်များ၊ အလှကုန်များအပြင် အခြားကုန်စည် ပစ္စည်းများစွာကို တွဲဖက်ပြသ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲနှင့်အတူ ခမ်းနားကြီး ကျယ်သည့် Fashion Show ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ ချစ်သူများနေ့ အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် စုံတွဲများနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အလိုက်ဖက် ဆုံးစုံတွဲ ရွေးချယ်ခြင်း၊ မုန့်စားပြိုင်ပွဲ၊ အနုပညာရှင်စုံတွဲများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ မော်ဒယ်များနှင့် လာရောက်ကြည့်ရှုသော ပရိသတ်များအား အပြန်အလှန် ပဟေဠိမေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းနှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကဏ္ဍများစွာဖြင့် နေ့စဉ်ဖျော်ဖြေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း GTR Media မှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး ကားသစ်၊ ကားဟောင်း လဲလှယ်ပေးမည့် အစီ အစဉ်အဖြစ် Future Auto မှ ၆ဂ/ . . .နှင့်အထက် ကားများကို ကားသစ်များနှင့် လဲလှယ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Future Auto အနေဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် ကား များကို ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေသကဲ့သို့ ကားသစ်နှင့် ကားဟောင်း လဲလှယ်မည့်အစီအစဉ်တွင်လည်း လဲလှယ်လိုသည့်ကား အမျိုးအစားမှာ အလိုက်ပေး လဲလှယ်ရမည့်ကားဖြစ်ပါက ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကားသစ်၊ ကားဟောင်း လဲလှယ်ပေးမည့် ၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Future Auto မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုဇေယျာစိုးက “Customer တွေအနေနဲ့ စီးပြီးသားကားတွေကို အသစ်နဲ့လဲချင်လို့ အပြင်မှာရောင်းရင် အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ ပွဲစားပါရင်လည်း ပွဲစားခ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ Future Auto အနေနဲ့ ကားသစ်နဲ့ ကားဟောင်း လဲလှယ်ချင်တဲ့ Customer တွေအတွက် ဈေးလည်း မနစ်နာရအောင်၊ တခြားအခက်အခဲတွေလည်း မရှိအောင်လို့ အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။ Future Auto အနေဖြင့် ကားသစ်များ ရောင်းချရာတွင် Warranty ခြောက်လပေးပြီး ရောင်းချပေးနေသော်လည်း လဲလှယ်သည့် ကားဟောင်းများကို ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် Warranty ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းအတွင်း ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းရာတွင် ယာဉ်/ယန္တရားစာရင်း၌ Mini Bus နှင့် Mini Truck အများဆုံးပါဝင်ကြောင်း ‘စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းဌာနခွဲ’ မှ သိရသည်။ ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်း၌ ယာဉ်/ယန္တရား လျှောက်ထားမှုစာရင်းတွင် အစီးရေ ၁,၅၂၈ စီး ပါမစ်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး Mini Bus၂၅၁ စီး၊ Mini Truck ၄၀၇ စီး၊ Light Truck ၄၂၃ စီးအပါအ၀င် Prime Mover ၊ Space Cab ၊ Pcik Up ၊ Double Cab ကားများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ လူစီးဆလွန်းများ၊ ၀က်ဂန်များနှင့် ထရပ်ကား၂၁၇ စီးကိုလည်း ပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ‘ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန’ မှ သိရသည်။ ယခုလအတွင်း ပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် လူစီးယာဉ်များထဲ၌ Toyota ၊ Honda ကားများ အများဆုံး ပါဝင်ခဲ့ပြီး Mazda ၊ Nissan ကားများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အစဖြစ်သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက် အထိ လူစီးယာဉ်၊ Truck နှင့် Bus ၁၇,၂၄၃ စီးကို ပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့ရာ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀,၄၆၄,၈၁၀ ရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဌာနမှ သိရသည်။
ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းတွင် ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် အ၀ိုင်းပတ်စနစ်အစား မီးပွိုင့်စနစ် အသုံးပြုရန် သင့်မသင့် အချိန် ငါးလခန့်ယူ၍ စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ‘ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း၊ တံတား)’မှ သတင်းရရှိသည်။ ယခင်ကတည်းက ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး အ၀ိုင်းအနီးရှိ စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်နှင့် အ၀ိုင်းမှတ်တိုင်တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ နှစ်ထပ်ရပ်၍ ခရီးသည်အတင်အချ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခရီးသည်စောင့်ဆိုင်းခြင်းတို့အပြင် လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတား ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုပြီးနောက်ပိုင်း ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု ပိုမိုမြင့်မားလာရာ အ၀ိုင်းပတ်စနစ်ကို ဖြုတ်သိမ်းရန်နှင့် မီးပွိုင့်စနစ်အသုံးပြုရန် သင့်မသင့် စစ်တမ်းကောက်ယူ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “လှည်းတန်းတံတား အဆင်းကလာတဲ့ ကားတွေရယ်၊ ဆူးလေ၊ မြေနီကုန်းဘက်ကလာတဲ့ ကားအစီးရေ များတာရယ်၊ ဘတ်စ်ကားတွေရဲ့ စည်းကမ်းမရှိမှုတွေရယ်ကြောင့် အ၀ိုင်းမှာ ယာဉ်ကြောကျပ်တာက ဆိုးလာတယ်၊ ရှစ်မိုင်မှာတော့ ဆင်ဆာစနစ်သုံး မီးပွိုင့်ကြောင့် တော်တော် အဆင်ပြေသွားတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အ၀ိုင်းကိုလည်း ဒီလိုလုပ်ဖို့ စဉ်းစားမိတာ၊ အဆင်ပြေ မပြေတော့ စစ်တမ်း ကောက်ပြီးမှသိမယ်”ဟု ‘မြို့တော် စည်ပင်၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း၊ တံတား)’ မှ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးမျိုးလွင်က ပြောသည်။ ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းကို အ၀ိုင်းပတ်စနစ် ဖြုတ်သိမ်း၍ မီးပွိုင့်စနစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကို ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ မေလအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မီးပွိုင့်စနစ် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အသုံးပြုသွားမည့် မီးပွိုင့်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်းနှင့် မီးပွိုင့်၌ ဆင်ဆာစနစ်အသုံးပြုခြင်း သင့် မသင့်တို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ လာရောက်မည့် ကုန်စည်တင်ယာဉ်များယာဉ် ကြောကျပ်တည်းမှု လျော့ကျစေရန် သာကေတ မြစ်ကူးတံတားသစ် တစ်စင်း ယခုနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်က ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ Asia Plaza ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ တံတားသစ်အား ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်နှင့် ဒေါပုံမြို့နယ်တို့ကို ချိတ်ဆက် တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ပြ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းရေး ဆွဲရေးအဖွဲ့(YUTRA) မှ စစ်တမ်းကောက်ယူနေကာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ နှစ်အလိုက် စီမံကိန်းတွေထဲက အခု ၂၀၁၄ ဆိုရင် ရှစ်မိုင်၊ မြေနီကုန်းမီးပွိုင့်တွေမှာ အချက်ပြစနစ်တွေပြောင်းပြီး တပ်ဆင်ဖို့နဲ့ သာကေတတံတားသစ် တည်ဆောက်ဖို့ ရှိပါတယ်၊ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းဘက်ကလာမယ့် ကုန်စည်တွေ ကူးသန်းပို့ဆောင်တဲ့အခါ ယာဉ်မကျပ်အောင်ပါ၊ အဓိက ရည်ရွယ်တာကတော့ ကုန်စည်တင်ယာဉ်တွေပဲ၊ ၂၀၁၅ ဆို ရင် ကုန်စည်တင်ယာဉ်တွေ ပိုများလာမယ်၊ ဒီအတွက် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားတာပါ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်ခင်ကပြောသည်။ ယခု ထပ်မံတည်ဆောက်မည့် မြစ်ကူးတံတားသစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အပြီး သတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။ “အရင်က တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြစ်ကူးတံတား အများစုက တံတားခံနိုင်ရည် တန် ခြောက်ဆယ် လောက်ပဲရှိတယ်၊ အခု ဆောက်မယ့်တံတားက ကုန်စည်တင်ယာဉ်တွေကို ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အနည်းဆုံး ခံနိုင်ရည် တန်ကိုးဆယ်နဲ့ အထက်ကိုပဲ တည်ဆောက်မှာပါ”ဟု ‘ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း၊ တံတား)’မှ ဒုတိယဌာနမှူးက ပြောသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလတွင် စတင် ဖောက်လုပ်ခဲ့သော အောင်မင်္ဂလာ လမ်းမကြီးမှာ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြီးစီးရန် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ အထိ ပြီးစီးမှုမရှိသည့်အတွက် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း အတွင်း ယာဉ်ကြောကျပ်မှုဆက်လက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ယာဉ်အ၀င်၊ အ ထွက်နေရာများ၌ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း ယာဉ်မောင်းများနှင့် ခရီးသည်များထံမှ စုံစမ်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်းအတွင်းရှိ လမ်းပေါင်း နှစ်ဆယ် ပြုပြင်ခင်း ကျင်းခြင်းနှင့် ဆိုက်ရောက်/ ထွက်ခွာ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက် ခြင်းများကြောင့် ၀င်းအတွင်း ယာဉ်အ၀င်အထွက် ဂိတ်ပေါက်များ ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီး ယခုအခါ အဓိက ယာဉ်ဝင်/ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံး ပြုနေသော အောင်မင်္ဂလာလမ်းမကြီးမှာလည်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးမှုမရှိသောကြောင့် ယာဉ်ကြောကျပ်မှု ပြဿနာ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေရကြောင်းနှင့် သုဓမ္မာလမ်းမကြီးကို အသုံးပြုနေရသော ခရီးသွားမှာလည်း အခက်ကြုံ နေရကြောင်း သိရသည်။ “အဝေးပြေးဝင်းမှာ ပိတ်နေတော့ သုဓမ္မာလမ်းတစ်လျှောက်လည်း ပိတ်တာပဲ၊ မြို့ထဲလည်း ပိတ်၊ မြို့ပြင်ပိတ်၊ ဘယ်နေရာမဆို ပိတ်နေတော့ ခက်တာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဒါက မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်းပိတ်တာ၊ ရုံးတက်/ရုံးဆင်း၊ ကျောင်း တက်/ကျောင်းဆင်းချိန်ကြီး ပိတ် နေတော့ အဆင်မပြေဘူး၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေက ကိစ္စမရှိပေမဲ့ ရုံးသမားတွေက ဒုက္ခအရမ်း ရောက်တယ်”ဟု မင်္ဂလာဒုံမြို့နေ မဥမ္မာက ပြောသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့တော်စည်ပင်(အခွန်ဌာန)မှ ဌာနခွဲမှူး ဦးဇော်မင်းက “ရေမြောင်း ပြင်ဆင်မှုနဲ့ လမ်းမတစ်လျှောက် ကားရပ်နားနေရာတွေ ထည့်သွင်း တည်ဆောက်နေရတဲ့ အတွက်ပါ၊ အရင်လမ်းဟောင်းကို ပြုပြင်ခင်းကျင်းရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲတော့ ရှိပါတယ်၊ လမ်းချဲ့မယ့် နေရာက ကန်စွန်းခင်း အဟောင်း တွေဆိုတော့ မြေဖို့တာကိုလည်း တော်တော်လေး လုပ်ခဲ့ရတယ်၊ အ ခုက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးနေပါပြီ၊ မကြာခင်ဖွင့်နိုင်မှာပါ၊ တစ်ခြမ်းခင်း စနစ်နဲ့ သွားရတဲ့အတွက်ယာဉ်ကြော ပိတ်တာတော့ အနည်းငယ်တော့ရှိ မှာပါ”ဟု ပြောသည်။ အဝေးပြေးခရီးသည်တင် ကားကြီးများနှင့်အငှားယာဉ်များ အဓိက အ၀င်/အထွက် ပြုလုပ်နေရသည့် အောင်မင်္ဂလာလမ်းမကြီးမှာ ၁/၇၈ ၅ ပေ ရှည်လျားကာ ၇၂ ပေကျယ်ဝန်းပြီး လက်ရှိတွင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးမှုရှိကြောင်း၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်းအတွင်း၌ အောင်မင်္ဂလာလမ်း ခင်းကျင်းမှုအပြင် ကားလက်မှတ် အရောင်းဂိတ်ခန်းများ ဆောက်လုပ်မှု၊ ၀င်းအတွင်းရှိ လမ်းနှစ်ဆယ် ခင်းကျင်းမှုနှင့် ၀င်းအပြင်တွင် လေးလမ်းသွား လမ်းမကြီး ခင်းကျင်း ဆောက်လုပ်မှုများ ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုနှစ်ဦး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်တာ ကာလအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားမှုပေါင်း ရှစ်ရာကျော်အထိ ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း ‘အမှတ်-၂ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး’မှ သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားမှု လျော့ကျစေရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ စတင်၍ မြို့တွင်း လမ်းမကြီးများပေါ်၌ ယာဉ်ရပ်နားမှုများအား ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ကာ ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းများ ဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ ၁၄ ရက်တာ ကာလအတွင်း၌ စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်နားထားသည့် ယာဉ်အစီးရေ ရှစ်ရာကျော် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အရေးယူမှုများတွင် ကရိန်းဖြင့်ဆွဲယူခဲ့သည့် ယာဉ် ၁၈၀ ကျော်နှင့် ချလန်ဖြတ် အရေးယူခဲ့သည့် ယာဉ် ၆၅၀ ခန့်အထိ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ “ယာဉ်ကြောတွေ ရှင်းလင်းဖို့အတွက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာတွေကို အဖွဲ့လေးဖွဲ့ခွဲပြီး လှည့်လည်စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးနေပါတယ်၊ ယာဉ်မောင်းသူတွေနဲ့ လမ်းအသုံးပြုသူတွေ စည်းကမ်းကို စနစ်တကျလိုက်နာမယ်၊ ဖမ်းဆီးဆောင် ရွက်ရတဲ့ အမှုတွေ လျော့နည်းလာမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် ဂုဏ်တက်စေတာပေါ့”ဟု အမှတ်-၂ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ ယာဉ်မရပ်ရ သတ်မှတ်နေရာ များ၌ ယာဉ်ရပ်နား၍ ဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်းခံရပါက ကရိန်းနှင့် ဆွဲယူသည့်ယာဉ်ဖြစ်လျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းခွဲခန့် ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ချလန်ဖြတ်အရေးယူပါက ယာဉ် မောင်းအား ဒဏ်ငွေ ကျပ် နှစ်သောင်းခွဲ ဒဏ်ရိုက် အရေးယူလျက်ရှိကာ ယင်းမှာ စည်ပင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၈ အရ ဒဏ်ရိုက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားမှုများကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်အထိ အမှုပေါင်း ၃,၀၅၆ မှု ရှိခဲ့ပြီး ယင်းတွင် ကရိန်းဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးမှု ၆၈၃ မှု၊ ချလန်ဖြတ် အရေးယူမှု ၂,၃၇၃ မှုအထိ ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကညန နံပါတျပွား အသုံးပွုခွငျး မရှိသော ယာဉျမောငျးမြားကို ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ တဈနှဈ ပိတျမညျ
အပျကားမြား ရှားပါးလာခွငျးကွောငျ့ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး အပျနှံမှုဌာနတှငျနစေ့ဉျပမျြးမြှ ကားအစီးရေ လေးဆယျ ဝနျးကငျြသာ လာရောကျအပျနှံ
နှဈအလိုကျ တငျသှငျးခှငျ့ပွု Model Year မြားကို ၂ နှဈမှ သုံးနှဈအထိ ခုနျတကျရနျ စီးပှား/ကူးသနျးမှ စီစဉျနေ
အမရေိကနျ ခကျြပလကျကားဖွငျ့ လဆေိပျနှငျ့ မွို့တှငျးပွေးဆှဲမှုစတငျ
ရှဈမိုငျလမျးဆုံတှငျ တပျဆငျထားသညျ့ မီးပှိုငျ့ထိနျးခြုပျဆငျဆာစနဈကွောငျ့ ခုံးကြျောတံတား တညျဆောကျမညျ့ အစီအစဉျကို ခတ်ေတရပျဆိုငျး
ယခုနှဈထုတျ Honda Fit Hybrid ကားမြား ပွနျလညျသိမျးဆညျး
၂ဝ၁၅ ခုနှဈမျောဒယျ Honda Civic မိတျဆကျ
ဆိပျကမျး၌ ပစ်စညျးပြောကျရှမှုအတှကျ Inspection တောငျးပွီး စဈဆေးမှုအပျေါ ဝဖေနျမှုမြား ထှကျပျေါ
သုံးဘီး မျောတျောယာဉျမြား အပျနှံခှငျ့ပေးခဲ့ပါက သုံးဘီးမျောတျောယာဉျမြားသာ ပွနျလညျတငျသှငျးခှငျ့ပွုမညျဟုဆို
‘အ’ အက်ခရာအပျနှံမှု တဈနိုငျငံလုံး၌ ၆ဝ ရာခိုငျနှုနျးကြျောသှားပွီ ဖွဈသျောလညျး ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး မူဝါဒသဈ ထှကျပျေါမလာသေး
၂ဝ၁၄ နှဈဆနျးပိုငျးတှငျ ယာဉျ/ယန်တရား လြှောကျထားမှုစာရငျး၌ Mini Bus နှငျ့ Mini Truck အမြားဆုံးပါဝငျ
၆ဂ/ . . . .နှငျ့ အထကျ ကားမြားကို ကားသဈမြားနှငျ့ လဲလှယျပေးမညျ
ဟံသာဝတီအဝိုငျး မီးပှိုငျ့စနဈအသုံးပွုရနျ သငျ့ မသငျ့ ငါးလခနျ့ အခြိနျယူ စဈတမျးကောကျမညျ
သာကတေ မွဈကူးတံတားသဈတဈစငျး ယခုနှဈအတှငျး တညျဆောကျမညျ
အောငျမင်ျဂလာလမျးမကွီး သတျမှတျကာလအတှငျး ပွီးစီးမှုမရှိသညျ့အတှကျ အဝေးပွေးဝငျးအတှငျး ယာဉျကွောပိတျဆို့မှု ဆကျလကျဖွဈပှား
နှဈပတျအတှငျး စညျးကမျးမဲ့ ယာဉျရပျနားမှုပေါငျး ရှဈရာကြျောအထိ ဖမျးဆီးအရေးယူ
စတကောကပျ မောငျးနှငျနသေညျ့ မျောတျောယာဉျမြားနှငျ့ က.ည.န မှတရားဝငျ ထုတျပေးထားသော ယာဉျနံပါတျပွား တပျဆငျ အသုံးပွုခွငျး မရှိဘဲ မိမိအစီအစဉျဖွငျ့ ဖနျတီးထားသော နံပါတျပွားမြား အသုံးပွုပွီး မောငျးနှငျသှားလာနသေော ယာဉျမောငျးမြားကို ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ တဈနှဈပိတျသိမျးသညျအထိ အရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ၊ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ တပျဖှဲ့မှူးဖွဈသူ ရဲမှူးကွီး ကြျောထှေးက ဒီဇငျဘာ ၂၅ ရကျ နံနကျပိုငျးတှငျ ပွောကွားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။စညျးကမျးခြိုးဖောကျသူမြား အလှနျမြားပွားလာတဲ့အတှကျ အခုလို အရေးယူရတာ ဖွဈကွောငျး ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့မှူးက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အခု စီမံခကျြဒဏျငှဆေိုတာ မရှိတော့ဘူး။ မျောတျောယာဉျ နညျးဥပဒအေရ ဒဏျငှေ ကပျြ၁၅ဝဝ ကနေ ၂ဝဝဝ ထိပဲ ပေးဆောငျရတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ယာဉျမောငျးတှေ၊ ယာဉျပိုငျရှငျတှအေနနေဲ့ စညျးကမျးပိုငျးကို လိုကျနာမှု အားနညျးလာတယျ။ စညျးကမျးဖောကျ ပွီးတော့ ဒဏျငှေ ကပျြ ၁၅ဝဝ ကို လှယျလှယျ ကူကူပေးဆောငျလာကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ စညျးကမျးတှေ လိုကျနာဖို့ စတကောကပျပွီးမောငျးတဲ့ ယာဉျမောငျးတှနေဲ့ ကားနံပါတျကို ဒီဇိုငျးလုပျပွီး မောငျးနှငျနတေဲ့ ယာဉျမောငျးတှကေို အနညျးဆုံး ယာဉျမောငျး လိုငျစငျ ခွောကျလကနေ တဈနှဈထိ ပိတျသိမျးအရေးယူသှားမယျလို့ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ၊ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဘုရငျ့နောငျ အမှတျ-၂ မွဈကူးတံတား တညျဆောကျမှုမှာ ၈ဝ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ပွီးစီးလကျြရှိပွီး ယခုနှဈ၊ ဧပွီလတှငျ ဖှငျ့လှဈ အသုံးပွုနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး ရနျကုနျမွို့တျော စညျပငျသာယာရေး ကျောမတီမှ သတငျးရရှိသညျ။ အမှတျ-၂ မွဈကူးတံတားကို ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန၊ အထူးစီမံကိနျးကွီးအဖှဲ့-၅ မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီ ၆ ရကျတှငျ စတငျ ဆောကျလုပျခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး ၂ဝ၁၄ ခုနှဈ၊ ဧပွီလတှငျ ဖှငျ့လှဈအသုံးပွုနိုငျရနျ လြာထားကွောငျး၊ တံတားတညျဆောကျမှု လုပျငနျးမြားမှာ ရှဈဆယျရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ပွီးစီးလကျြရှိကာ လကျရှိတှငျ တံတားသံဘောငျ တပျဆငျမှုလုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ တံတားတညျဆောကျမှုက ခနျ့မှနျးထားတာထကျ ပွီးစီးမှုမွနျတယျလို့ ပွောရမယျ၊ ဒီကွားထဲမှာ ဆောငျရှကျမှု နှေးသှားရငျတော့ ဇှနျလလောကျမှပဲ ဖှငျ့လှဈအသုံးပွုနိုငျမယျ၊ လကျရှိအနအေထားအရ ဆိုရငျ ဧပွီလလောကျမှာ ဖှငျ့နိုငျမှာပါ၊ ဘုရငျ့နောငျခုံးကြျောတံတား ဖှငျ့ပွီးတာတောငျ အပျေါလှာတံတားက ကပျြနတေုနျးပဲ၊ ဒါက မွဈကူးတံတား မပွီးသေးလို့၊ မွဈကူး တံတားပွီးရငျတော့ တျောတျော အဆငျပွသှေားမှာပါဟုမွို့တျောစညျပငျ၊ အငျဂငျြနီယာဌာန(လမျး တံတား)မှ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးစညျသူလှငျက ပွောသညျ။
ဘုရငျ့နောငျ အမှတျ-၂ မွဈ ကူးတံတား တညျဆောကျမှုကွောငျ့ ဘုရငျ့နောငျ အပျေါလှာတံတားပျေါတှငျ ကားကပျြမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ နှဈထပျခုံးကြျောတံတား ဖှငျ့လိုကျပွီဆိုပမေဲ့ လှိုငျသာယာဘကျကို သှားတဲ့ကားက မြားနတေော့ တံတားပျေါမှာ နညျးနညျး ကပျြနတေယျ၊ လှိုငျသာယာဘကျသှားတဲ့ ကားက အရငျနှဈထကျ ခုနဈဆ၊ ရှဈဆလောကျ မြားလာတယျ၊ မွဈကူးတံတားပွီးရငျတော့ တျောတျော အဆငျပွမှောပါ၊ လကျရှိ ကပျြနတောက သီရိမှနျနဲ့ ဘုရငျ့နောငျလမျးကွားမှာပါ၊ လမျးခငျးနတောကွောငျ့လညျး ပါပါတယျဟု ဘုရငျ့နောငျ အဝေးပွေးကုနျစညျဒိုငျအသငျး ဥက်ကဌဦးခငျဟနျက ၎င်းငျး၏ အမွငျကို ပွောပွသညျ။ ရနျကုနျမွို့၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ ဘုရငျ့နောငျဘကျကမျးနှငျ့ လှိုငျသာယာဘကျကမျးကို ခြိတျဆကျပေးမညျ့ ဘုရငျ့နောငျ အမှတျ-၂ မွဈကူးတံတားကွီးမှာ ယာဉျသှားလမျး လေးလမျးပါရှိပွီး ပငျမ တံတား အရှညျမှာ ၁ç၆၂၈ ဒသမ ၃ ပနှေငျ့ ခံနိုငျဝနျအလေးခြိနျ ၇၅ တနျ သတျမှတျထားကွောငျး၊ ရလေမျး ကငျးလှတျခှငျ့ အမွငျ့ပေ ၃၆ ပရှေိကာ အဆိုပါတံတားကို ငှကေပျြသုံးဆယျ ဘီလြံခနျ့ အကုနျအကခြံ တညျဆောကျမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး အပျကားမြား ရှားပါးလာခွငျးကွောငျ့ အပျနှံမှု လြော့ကလြာခဲ့ပွီး ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး အပျနှံမှုဌာနတှငျ နစေ့ဉျပမျြးမြှ ကားအစီးရေ လေးဆယျ ဝနျးကငျြသာ လာရောကျ အပျနှံလကျြရှိကွောငျး ‘မွငျသာ ကညနရုံး’ မှ သိရသညျ။ အပျနှံဆဲဖွဈသညျ့ ‘အ’အက်ခရာ ကားမြားမှာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၌ အစီးရေ ၄,၇၅ဝ ရှိရာ ဇနျနဝါရီ ၆ ရကျ အထိ ၃,၄ဝ၈ စီး အပျနှံခဲ့ပွီး ဖွဈသောကွောငျ့ အစီးရေ ၁,၃ဝဝ ကြျောသာ ကနျြရှိတော့သညျ။ ထို့အတူ အပျနှံရနျကနျြရှိသညျ့ ‘လ၊ သ’ အက်ခရာကားမြားသညျလညျး အပျနှံမှုပွီးပွတျရနျ အနညျးငယျသာ လိုတော့သညျ့အတှကျ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး အပျနှံမှုဌာနတှငျ အက်ခရာအစုံမှ ကားအစီးရေ ပမျြးမြှ လေးဆယျ ဝနျးကငျြသာ အပျနှံမှုရှိနပွေီး အပျနှံမှုလြော့ကလြာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျးအပျနှံမှု စာရငျးမြားအရ ဇနျနဝါရီ ၇ ရကျအထိ လူစီးယာဉျ စုစုပေါငျး ခွောကျသောငျးကြျော၊ ဘတျဈကား အစီးရေ စုစုပေါငျး ကိုးရာကြျောနှငျ့ ထရပျကား အစီးရေ စုစုပေါငျး ၂,၅ဝဝ ကြျော အပျနှံခဲ့ပွီး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ အက်ခရာစဉျအလိုကျ အပျနှံမှုမြားအရ ‘အ’အက်ခရာ ၃,၄ဝ၉ စီး၊ ‘သ’ အက်ခရာ ၄,၆၈၂ စီးနှငျ့ ‘လ’အက်ခရာ ၃,၉၁၈ စီး အပျနှံခဲ့ပွီး ဖွဈကွောငျး ‘ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန’ မှ သိရသညျ။ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျးမြား အပျနှံမှု လြော့ကလြာသျောလညျး အပျနှံမှုပျေါလစီ ပွောငျးလဲခွငျးမရှိသေးခွငျးကွောငျ့ အပျကားမြား၏ စလဈစြေးမြားမှာ စြေးတနျ့နခေဲ့ကာ ‘လ၊ သ၊ အ’အမညျပေါကျ ကားဟောငျး စလဈတဈစောငျလြှငျ ကပျြ ၉၅ သိနျးဝနျးကငျြ၊ တက်ကစီ စလဈတဈစောငျလြှငျ ကပျြ ၆၇ သိနျးဝနျးကငျြ ပေါကျစြေးရှိကွောငျး ကား ဝယျ/ရောငျးမြားထံမှ သိရသညျ။
မိုဒယျမွငျ့ကားမြား မြားလာစရေနျအတှကျ တငျသှငျးခှငျ့ပွု Model Year မြားကို တဈနှဈလြှငျ မိုဒယျ ၂ နှဈမှ သုံးနှဈအထိ ခုနျတကျရနျ စီစဉျထားကွောငျး ‘စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန’မှ သိရသညျ။ ပွညျပမှ မျောတျောယာဉျမြား တငျသှငျးရာတှငျ ဖှံ့ဖွိုးပွီး နိုငျငံမြားနညျးတူ နှဈအကနျ့အသတျ အနညျးငယျဖွငျ့ တငျသှငျးခှငျ့ပေးပွီး မိုဒယျမွငျ့ကားမြား မြားလာစရေနျအတှကျ လာမညျ့နှဈမြား၌ Model Year၂ နှဈမှ သုံးနှဈအထိ ခုနျကူးရနျ စီစဉျထားကွောငျး စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျ ရေးဝနျကွီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူတဈ ဦးက ပွောသညျ။ အနာဂတျတှငျ ဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ ကားတငျသှငျးခှငျ့ မူဝါဒနှငျ့ ပတျသကျ၍ စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ဒီနှဈမှာ ၁၉၉၇ မိုဒယျကနေ ၂ဝဝဝ မိုဒယျကို ခုနျကူးခဲ့သလို လာမယျ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈမှာလညျး ၂ဝဝဝ မိုဒယျကနေ ၂ဝဝ၃ မိုဒယျကို ခုနျကူးဖို့ စီစဉျထားပါတယျ၊ တိုငျးပွညျ တဈပွညျမှာ ကားတငျသှငျးတယျဆိုတာ ငါးနှဈအတှငျး ထုတျလုပျတဲ့ ကားပဲ သငျ့တျောပါတယျ၊ လုပျငနျး သုံးယာဉျတှအေတှကျကတော့ ၁ဝ နှဈအတှငျးဆိုရငျ သငျ့တျောပါတယျ၊ မွနျမာနိုငျငံမှာ မိုဒယျမွငျ့ ကားတှေ ဝငျရောကျလာဖို့အတှကျ တဈနှဈနဲ့တဈနှဈ မိုဒယျတှေ ခုနျ ကူးသှားဖို့ စီစဉျထားပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ဒီနိုငျငံမှာရှိတဲ့ လမျးအနအေထားနဲ့ စကျသုံးဆီ အရညျအသှေးကို တှကျခကျြပွီး တဈနှဈမှာ မိုဒယျ ဘယျလောကျ ခုနျကူးမလဲ ဆိုတာ စဉျးစားတှကျခကျြ နပေါ တယျ”ဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။ ၂ဝ၁၄ ခုနှဈအတှကျ ထုတျပွနျခဲ့သော CIF တနျဖိုးအသဈတှငျ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး အစားထိုးလဲလှယျမှုအတှကျ လူစီးယာဉျမြားကို ၂ဝဝဝ မိုဒယျမှ ၂ဝဝ၈ မိုဒယျအတှငျး၊ တဈဦးခငျြး ပါမဈဖွငျ့ တငျသှငျးသော လူစီးယာဉျမြားကို ၂ဝဝ၉ မိုဒယျမှ ၂ဝ၁၃ မိုဒယျအတှငျး၊ ကုနျတငျယာဉျမြား ကို ၂ဝဝ၄ မိုဒယျမှ ၂ဝ၁၄ မိုဒယျအတှငျး ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။
အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးဝငျး၌ အဝေးပွေးယာဉျမြားဆိုကျရောကျ နိုငျရနျ Arrival ဝငျးတညျဆောကျ၍ ခရီးသညျမြားကို ဝနျဆောငျမှုပေး လကျြရှိရာ ယခုလပိုငျးတှငျ Arrival ဝငျး၌ ယာဉျဝငျရောကျမှုလြော့နညျး လကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။ ဤကဲ့သို့ အောငျမင်ျဂလာအဝေး ပွေးယာဉျမြားဆိုကျရောကျနိုငျရနျ အတှကျ Arrival စခနျးကို (၂ဝ၁၃) ခုနှဈ (၈) လပိုငျး၌ အစမျးဖှငျ့ခဲ့ပွီး (၉) လပိုငျးမှစတငျ၍ တရားဝငျဖှငျ့ လှဈခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ တရားဝငျဖှငျ့ လှဈခဲ့သညျ့ (၉) လပိုငျးတှငျ Arrival ဝငျးသို့ ယာဉျအစီးရေ တဈနလြေှ့ငျ အမြားဆုံး (၃၉၉) စီးအထိဝငျရောကျ ခဲ့သျောလညျး ယခုအခါတှငျ တဈရကျ ကို (၁၈၈) စီးသာဝငျရောကျဆိုကျ ကပျတော့ကွောငျး အောငျမင်ျဂလာ အဝေးပွေး Arrival ဝနျးမှ တာဝနျရှိ သူ၏ပွောကွားခကျြအရ သိရှိရသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ ယာဉျအစီးရလြေော့ နညျးသှားရခွငျးမှာ ခွောကျလမျးသှား နှငျ့ အမှတျ (၃) လမျးမကွီးပွငျနေ သညျ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈကွောငျးကို လညျး ၎င်းငျးငျးမှဆကျလကျပွောကွားခဲ့ သညျ။ အဆိုပါ အောငျမင်ျဂလာအဝေး ပွေး Arrival ဝငျးကို လုပျကိုငျခှငျ့အားMYINT & PAING Co., Ltd. မှ BOT စနဈဖွငျ့ (၁၇) နှဈ လုပျကိုငျခှငျ့ ရရှိခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ ယငျးဝငျး အတှငျး ဆိုကျရောကျခကိုကားကွီး တဈစီး (၅ဝဝ) ကပျြ၊ ကားလေး တက်ကစီ (၂ဝဝ) ကပျြတို့ဖွငျ့အသီး သီးကောကျခံပွီး Public နံပါတျ အနကျကို ငှကွေေးကောကျခံခွငျး မပွုကွောငျးသိရသညျ။ အောငျမင်ျဂလာ အဝေးပွေးယာဉျ Arrival ဝငျးသညျ တဈရကျလြှငျ ခနျ့ မှနျးခွေ ခရီးသညျ (၆ဝဝဝ) ကြျောကို ဝနျဆောငျမှုမြားပေးနကွေောငျးသိရှိရ သညျ။ ယငျးကဲ့သို့ အဝေးပွေးယာဉျ မြားသညျ Arrival တှငျဆိုကျရောကျ ပါက ခရီးသညျမြားသှားလာမှု လှယျ ကူစရေနျ City Bus နှငျ့ တက်ကစီမြား ကိုလညျး အဆငျသငျ့ထားပေးထား ကွောငျးသိရသညျ။ အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေး Arrival စခနျးကို တညျဆောကျနိုငျခွငျး ကွောငျ့ နိုငျငံတကာကဲ့သို့ Arrival စခနျးသီးသနျ့တညျရှိပွီး ယခငျကလို တက်ကစီမြားနောကျမှ လိုကျလာခွငျး မရှိသညျ့အတှကျ ခရီးသညျမြားအဆငျ ပွစှောသှားလာနိုငျပွီး ယာဉျကွောပိတျ ဆို့မှုကို အနညျးငယျလြှော့ခနြိုငျမှာဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။
ဝှီးခြဲ(လျ) (၆) စီးတငျဆောငျ နိုငျသော အမရေိကနျခကျြပလကျကား ဖွငျ့ လဆေိပျနှငျ့ မွို့တှငျးပွေးဆှဲမှု အား Airport Shuttle ကုမ်ပဏီမှ ဒီဇငျဘာလအတှငျး စတငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ဝှီးခြဲ(လျ) (၆) စီးတငျဆောငျနိုငျပွီး လူခညျြးသကျသကျ သာဆိုပါက (၁၈) ယောကျခနျ့စီးနငျး နိုငျသော ခကျြပလကျကားဖွငျ့ ဝနျဆောငျမှုပေးနကွေောငျး အဆိုပါ ကုမ်ပဏီ၏ တာဝနျရှိသူ ဦးကြျောကြျော ကပွောပွခဲ့သညျ။
သကျကွီးရှယျအိုမြားနှငျ့ မသနျစှမျးဝဒေနာရှငျ မြားအတှကျ ရညျရှယျကာ အလှယျတကူစီးနငျးနိုငျရနျ ဝှီးခြဲ(လျ)ပါ တငျဆောငျ နိုငျသညျ့ အဆိုပါ ကားဖွငျ့ ပွေးဆှဲခွငျးဖွဈကာ လကျရှိ အခြိနျတှငျ တဈစီးတညျးသာ ပွေးဆှဲနပွေီး အစီးရတေိုးခြဲ့ ပွေးဆှဲသှားရနျ ရှိကွောငျးသိရသညျ။ အဓိကမသှားနိုငျ မလာနိုငျတဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှနေဲ့ မသနျစှမျးတဲ့သူတှအေတှကျပါ။ ဝှီးခြဲ(လျ) ကိုတှနျးတဲ့သူပါ အဆငျပွေ အောငျ ဟိုကျဒွောလဈတှနေဲ့ လုပျထားတယျ။ ဝှီးခြဲ(လျ)ကို မစရာမလိုဘဲ တှနျးသှားလို့ရအောငျ လုပျထားတယျ။စြေးနှုနျးကတော့ မိသားစုအရအေတှကျပျေါ မူတညျပွီးယူပါတယျ။ အခု ရနျကုနျ မွို့ထဲမှာ ဝှီးခြဲ(လျ)တှပေါသှားလို့ရ အောငျ လမျးတှခေငျးမယျ လို့သိထားတယျ။ အဲ့လိုတှပေါရှိလာရငျတော့ ပို ကောငျးတာပေါ့လို့ အဆိုပါပုဂ်ဂိုလျ ကပွောပွခဲ့သညျ။ Airpot Shuttle အနဖွေငျ့ (၇) ကွိမျမွောကျကငျြးပမညျ့ မသနျစှမျး ဆီးဂိမျးအားကစားပွိုငျပှဲတှငျပါဝငျသော မသနျစှမျးအားကစားသမားမြား အတှကျပါ ကူညီအားဖွညျ့ဆောငျ ရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးသိရှိရသညျ။
(၂ဝ၁၄) ခုနှဈ ဇနျနဝါရီ (၁) ရကျမှစတငျ၍ ပစ်စညျးအမြိုးအမညျ (၁၂) မြိုးအား စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ကူးသနျးရောငျး ဝယျရေးနှငျ့ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရုံး၊ သှငျးကုနျ ဌာနခှဲ၌ သှငျးကုနျလိုငျစငျမြား အဖွဈ လြှောကျထားခှငျ့ ပွုသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ယခငျက သှငျးကုနျလိုငျစငျမြားကို နပွေညျတျောတှငျသာ လိုငျစငျလြှောကျ ထားရပွီး ယခုနှဈ ဇနျနဝါရီတှငျ ရနျကုနျ၌ လြှောကျထားခှငျ့ ပွုလိုကျခွငျးဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရှိ စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျ ရေးဝနျကွီးဌာနတှငျ လိုငျစငျလြှောကျထားခှငျ့ပွုလိုကျသညျ့ ပစ်စညျးအမြိုးအစား မြားမှာ ကားအပိုပစ်စညျးမြား၊ တာယာအမြိုးမြိုး၊ ဆောကျလုပျရေးပစ်စညျးမြား၊ အလှကုနျပစ်စညျးမြား၊ ဆိုငျကယျအပိုပစ်စညျးမြား၊ စကျမှုကုနျကွမျး၊ စကျဆီ၊ ခြောဆီ၊ စကျနှငျ့ စကျအပိုပစ်စညျးမြား၊ အပျခြုပျစကျ၊ မီးစကျ၊ ရုံးသုံးကိရိယာ၊ ဂငျြနရတော စသညျတို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထိုပစ်စညျးမြားထဲတှငျ ကားတာယာမြားမှာ ယခငျက လိုငျစငျလြှောကျထား စရာမလိုဘဲ တငျသှငျးသညျ့အခါ၌သာ အခှနျပေးဆောငျသှငျးရပွီး ယခုအခြိနျ တှငျ သှငျးကုနျလိုငျစငျဖွငျ့ ပွနျလညျလြှောကျထားရနျ သတျမှတျလိုကျကွောငျး သိရသညျ။ ကြှနျတျောတို့ တာယာတှကေ အရငျက လိုငျစငျလြှောကျစရာမလိုဘဲ အခှနျဆောငျပွီးပဲသှငျးရတာ။ အခုက ရနျကုနျမှာပဲ သှငျးကုနျလိုငျစငျပွနျ လြှောကျရတော့မယျဆိုတော့ ဒါက တာယာတှဝေငျရောကျလာတာကို ထိနျးခြုပျ တာလညျး ပါမယျထငျတယျ။ ဒီလိုလုပျလိုကျတဲ့အတှကျ အရညျအသှေးမီတဲ့ တာယာတှေ ပိုပွီး တငျသှငျးလာနိုငျပါတယျ လို့ ကားတာယာမြားတငျသှငျး ရောငျးခသြညျ့ ဆိုငျတဈဆိုငျမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးကလညျး ပွောပွခဲ့သညျ။
ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုဖွဈပျေါ နသေော ရှဈမိုငျလမျးဆုံတှငျ ယခငျက ခုံးကြျောတံတား တညျဆောကျရနျ ရညျရှယျထားသျောလညျး ယခုအခါ မီးပှိုငျ့ထိနျးခြုပျ ဆငျဆာတပျဆငျ လိုကျခွငျးကွောငျ့ ခုံးကြျောတံတား တညျဆောကျမညျ့ အစီအစဉျကိုခတ်ေတ ရပျဆိုငျးထားကွောငျး ကုနျးလမျးပို့ ဆောငျရေးမှ အကွီးတနျးအရာရှိတဈ ဦးကပွောကွားခဲ့သညျ။ ရှဈမိုငျလမျးဆုံတှငျ တပျဆငျ ထားသော မီးပှိုငျ့ထိနျးခြုပျဆငျဆာ စနဈသညျ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုပျေါ မူတညျ၍ ထိနျးခြုပျပေးသညျ့စနဈဖွဈ သောကွောငျ့ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုကို လြှော့ခနြိုငျခွငျးကို စောငျ့ကွညျ့နေ ကွောငျးသိရသညျ။ ထို့အတှကျ ခုံး ကြျောတံတားတညျဆောကျမညျ့ အစီ အစဉျကို ခတ်ေတရပျဆိုငျးထားခွငျးဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ ရှဈမိုငျလမျးဆုံ တှငျ မီးပှိုငျ့လေးခု တပျဆငျထားပွီး ဆငျဆာစနဈသညျ မီးပှိုငျ့တဈခုတှငျ ကငျမရာတဈလုံးစီ တပျဆငျထားပေး ကွောငျးသိရသညျ။ ယငျးကငျမရာမြား သညျ မီးပှိုငျ့၏ဂရပျမဉျြးမှ မီတာ (၃ဝ) အကှာအဝေးထိရှိသော ယာဉျ မြားကို ထိနျးခြုပျပေးပွီး ယာဉျကွော ရှငျးလငျးပေးသညျ့စနဈတှငျ Manual နှငျ့ Auto ခလုတျမြားပါဝငျကွောငျး သိရှိရသညျ။
ဟှနျဒါကုမ်ဗဏီက ၂ဝရကျနမှေ့ာ အငျဂငျြကိုထိနျးခြုပျသော ပရိုဂရမျ(program)မှာ ခြှတျယှငျးခကျြမြား တှရှေိ့ခဲ့တဲ့အတှကျ အသေးစား Fit Hybrid (HV) ကား အရအေတှကျ ၃၆,၁ဝဝစီး (ယခုနှဈ (၇)လပိုငျးမှ (၁၂)လ ပိုငျးအထိ ထုတျလုပျခဲ့သော ကားမြား) ကို Recall (ပွနျလညျသိမျးစညျးခွငျးနှငျ့ အခမဲ့ပွုပွငျပေးခွငျး) ချေါယူမညျ ဖွဈကွောငျး ဂပြနျ ကုနျးလမျး ပို့ဆောငျရေး ဌာနသို့စာပို့လိုကျကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ဟှနျဒါကုမ်ဗဏီသို့၉လပိုငျးနောကျပိုငျး ယငျးပွဿနာနှငျ့ ပတျသကျ၍ ၃၆၂ကွိမျ အကွောငျးကွား ဆကျသှယျမှုမြားကို လကျခံရရှိထားပွီး ဖွဈသျောလညျး ယာဉျတိုကျခိုကျ ပကျြစီးမှု ပွဿနာ မြားကိုတော့ယခုအခြိနျအထိ မရရှိသေးကွောငျးလဲ ပွောကွားထားပါတယျ။ ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးဌာနမှ ပွောဆိုခကျြအရ အငျဂငျြနှငျ့ ဂီယာပိုငျးကို ထိနျးခြုပျသော စနဈရဲ့ပရိုဂရမျမှာ ပွဿနာရှိတာဖွဈပွီး အရှိနျနဲနဲနှငျ့ မောငျးနှငျစဉျ အငျဂငျြရပျတနျ့သှားခွငျးပွုပွငျရနျ(故障) ဆိုသော မီးမြားလငျးလာ၍ မောငျးနှငျလို့မရနိုငျတာမြိုး ရှိနိုငျကွောငျး ပွောကွားသှားပါတယျ။ လကျရှိ မွနျမာပွညျသို့တငျသှငျးနသေော ကားအတျောမြားမြားက နှောငျးပိုငျးကားမြား ဖွဈသညျ့အတှကျ အထှအေထူး လုပျဆောငျစရာမြား မလိုအပျကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ကားအမြိုးအစား - Honda Fit Hybrid-(HV)
ထုတျလုပျကာလ - 07/2013 မှ 12/2013
အရညျအတှကျ -- 36,100
၂ဝ၁၅ ခုနှဈမျောဒယျအတှကျ ပွငျဆငျထားတဲ့ Honda Civic ကို ယခုလို မွငျတှေ့ ရပါတယျ။ Prototype အနနေဲ့ ထုတျလုပျထားပွီး စမျးသပျမောငျးနှငျနမှေု ဖွဈပါတယျ။ အငျဂငျြအရှယျ ၂ လီတာ ရှိပွီး ဆလငျဒါ လေးလုံးပူး V အငျဂငျြကို အသုံးပွု တပျဆငျ ထားပါတယျ။ မွငျးကောငျ ရအေား ထုတျလုပျမှု ၂၈ဝ ဝနျးကငျြ ရှိပွီး Euro6mission standard နဲ့ လြျောညီတဲ့ မီးခိုးထုတျ စနဈ ဖွဈကွောငျး ဆို ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ လြျောညီ ကိုကျညီစမေယျ့ ကား ဖွဈကွောငျး ဆိုပါတယျ။ ဟိုငျးဘရဈ ဗားရှငျးလညျး ထုတျလုပျ အုံးမှာပါ။ အမွနျဆုံး မောငျးနှငျနိုငျမှု Speed က တဈနာရီ ၁၂၄ မိုငျ ဝနျးကငျြ အထိ ရှိပါတယျ။ နောကျဘကျ Hatchback ပါ တံခါး ငါးပေါကျ hatchback ကား ဖွဈပွီး Honda insight နဲ့တောငျ ခပျဆငျဆငျ ရှိပါတယျ။ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈမျောဒယျအတှကျ ပွငျဆငျထားတဲ့ ကားကို ၂ဝ၁၄ နှဈလယျနောငျးပိုငျး ထုတျလုပျ ရောငျးခြ နိုငျရနျ မြျောမှနျးထားကွောငျး သိရ ပါတယျ။
သုံးဘီး မျောတျောယာဉျမြား အပျနှံခှငျ့ပေးခဲ့ပါက အမြိုးတူ သုံးဘီး မျောတျောယာဉျမြားကိုသာ ပွနျလညျ တငျသှငျးခှငျ့ ပွုမညျဖွဈကွောငျး ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတဈဦးက ပွောကွားခဲ့သညျ။ ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး ဦးစီးဌာနက ပွညျပမှ တငျသှငျးလာသော မျောတျောယာဉျမြားကို တဈဆငျ့ခငျြး အပျနှံခှငျ့ပွုခဲ့ရာ သုံးဘီး မျောတျောယာဉျမြား အသုံးပွုနသေော မန္တလေးမွို့နှငျ့ အခွားနယျ မွို့မြား၌ သုံးဘီးယာဉျမြား အပျနှံခှငျ့ပေးမညျဟု သတငျးမြား ထှကျပျေါခဲ့သညျ။ သုံးဘီးယာဉျမြား အပျနှံခှငျ့ပွုမညျဆိုသညျ့ သတငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတဈဦးက “ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလလောကျက ပွညျနယျနဲ့ တိုငျးဒသေကွီးတှမှောရှိတဲ့ သုံးဘီး ယာဉျအစီးရကေို ကောကျယူခဲ့ပါတယျ၊ စာရငျးကောကျပွီ ဆိုတာနဲ့ အပျမယျဆိုပွီး ယူဆနပေါတယျ၊ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျးအပျနှံပွီး အစား ထိုးယာဉျ ပွနျလညျတငျသှငျးခှငျ့ ပွုတဲ့နရောမှာ ယာဉျအမြိုးအစားအလိုကျ ခှဲထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ၊ Light Truck အုပျစုအပျရငျ Light Truck ပဲ ပွနျသှငျးရမယျ၊ လူစီးယာဉျအပျရငျ လူစီးယာဉျပဲ ပွနျသှငျးရမယျ၊ ခရီးသညျတငျယာဉျအပျရငျ ခရီးသညျတငျယာဉျပဲ ပွနျသှငျးရမယျ၊ အငှားယာဉျအပျရငျ အငှားယာဉျပဲ ပွနျသှငျးရမယျ၊ သုံးဘီးယာဉျအပျရငျ သုံးဘီးယာဉျကိုပဲ ပွနျသှငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ သုံးဘီးယာဉျတှကေို အပျနှံခှငျ့ပေးခဲ့ရငျတောငျ သုံးဘီး ယာဉျပဲ ပွနျရမှာ ဖွဈပါတယျ” ဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။ မန္တလေးမွို့၌ သုံးဘီးယာဉျမြား အပျနှံခှငျ့ပေးမညျဆိုသော သတငျးမြားအပျေါ ကားဝယျ/ ရောငျး တဈဦးကလညျး “သုံးဘီးယာဉျတှကေို ဝယျ/ရောငျးတှကေတော့ မဝယျကွပါဘူး၊ သုံးဘီး ယာဉျပိုငျရှငျတခြို့က နိုငျငံတျောကို နှဈငါးဆယျလောကျ အလုပျအကြှေးပွုခဲ့တဲ့ ဒီကားတှကေို အပျနှံခှငျ့ ပွုပေးပါဆိုပွီး သမ်မတကို စာ တငျထားပါတယျ၊ ဒါကို စီးပှားရေးသမားတှကေ သူတို့ဝယျထားတဲ့ သုံးဘီးယာဉျတှကေို အမွတျတငျပွီး ပွနျလညျ ထုတျရောငျးကွဖို့အတှကျ ကောလာဟလသတငျးတှေ ထုတျပွနျနကွေတာဖွဈပါတယျ” ဟု ဆိုခဲ့သညျ။
ကားအတှငျးခနျးပစ်စညျးမြားနှငျ့ အပိုပစ်စညျးမြား ပြောကျရှမှုဖွဈပျေါလြှငျ ဆိပျကမျးက Inspection တောငျးပွီး စဈဆေးနခွေငျးသညျ မှားယှငျးသညျ့လုပျရပျဟု ကားတငျသှငျးသူမြားက ဝဖေနျပွောကွားခဲ့သညျ။ ဆိပျကမျး၌ ပစ်စညျးအပြောကျအရှမြား ရှိခဲ့ပါက Complaint တကျသညျ့အခါတှငျ တာဝနျရှိသူမြားက ဂပြနျဘကျမှ Inspection တောငျးပွီး စဈဆေးမှုမှာ သငျ့တျောမှုမရှိကွောငျး ကားတငျသှငျးသူတဈဦးက ပွောကွားခဲ့သညျ။ “ဆိပျကမျးမှာ စီမံခကျြနဲ့ လုံခွုံရေး တိုးမွှငျ့ထားပမေဲ့ ပစ်စညျးပြောကျရှမှုက အနညျးနဲ့အမြား ရှိနတေုနျးပါပဲ၊ ပစ်စညျးပြောကျလို့ Complaint တကျတဲ့အခါမှာ Inspection ကို တောငျးပါတယျ၊ ကားတဈစီးမှာ ပစ်စညျးစုံတယျဆိုရငျ Inspection မှာ ဘာမှပွမှာ မဟုတျပါဘူး၊ ဒါကို ဆိပျကမျးက ကား တဈစီးမှာပါတဲ့ ပစ်စညျးစာရငျးကို တောငျးပါတယျ၊ ကားတဈစီးမှာ ပါဝငျတဲ့ Accessory က အမြားကွီးပါပဲ၊ ကားအတှငျးခနျးမှာဆိုရငျ Accessory က အခု ခွောကျဆယျ လောကျပါပါတယျ၊ ဥပမာ-ကား တဈစီးကို ဂီယာဘုသီးပါမှ မောငျးလို့ရမှာဖွဈပါတယျ၊ ဒါကို Inspection မှာ ဂီယာဘုသီးပါတယျလို့တော့ ထညျ့မရေးထားဘူး၊ မပါမှ မပါဘူးလို့ရေးတာပါ၊ ဒါကွောငျ့ ကားအတှငျးခနျးအားလုံးရဲ့ List ကို တောငျးတဲ့အခါ အခကျတှရေ့ပါတယျ၊ တကယျလို့ ဂပြနျဆိပျ ကမျးဘကျက ဓာတျပုံပွရငျလညျး ဆိပျကမျးအနနေဲ့ ဒီဓာတျပုံအပျေါ မှာ ယုံကွညျမှု ဘယျလောကျရှိသလဲဆိုတာ သိခငျြပါတယျ၊ ပစ်စညျးပြောကျလို့ Complaint တကျတဲ့အခါ ဂပြနျဘကျက ဘာပါသလဲ ဆိုတဲ့စာရငျးကို တောငျးတာဟာ အဓိပ်ပာယျမရှိဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ ကားတဈစီးဝယျပွီ ဆိုကတညျးက အကုနျလုံး ပါပါတယျ၊ မပါဘူးဆိုရငျ Auction မှာကတညျးက ဘယျပစ်စညျး မပါဘူးဆိုတာ ပွထား ပါတယျ”ဟု Future Auto မှ မနျနဂေငျြးဒါရိုကျတာ ကိုဇယြောစိုးက ၎င်းငျး၏အမွငျကို သုံးသပျပွောကွားခဲ့သညျ။
တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာအနေ ဖွငျ့ ‘အ’ အက်ခရာကားမြား အပျနှံမှုသညျ ၆ဝ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောသှား ပွီဖွဈသျောလညျး ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျးအပျနှံမှု ပျေါလစီသဈကို တရားဝငျ ထုတျပွနျနိုငျဦးမညျ မ ဟုတျသေးကွောငျး ‘ကုနျးလမျးပို့ ဆောငျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန’ မှ သိရသညျ။ ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန အနဖွေငျ့ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျးအပျနှံမှု ပျေါလစီ အရ အပျနှံဆဲအက်ခရာကား အရအေတှကျသညျ ၆ဝ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောလှနျပါက နောကျဆကျတှဲ အက်ခရာတဈခုကို အပျနှံခှငျ့ပွုခဲ့ရာ ‘အ’ အက်ခရာကားမြား၏ အပျနှံမှုသညျ ရာခိုငျနှုနျး ပွညျ့မီသှားပွီ ဖွဈသညျ။ အက်ခရာ တဈခုခငျြးစီတှငျ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာအနဖွေငျ့ အစီးရေ ၈,၈ဝဝ ဝနျးကငျြရှိရာ အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျက အပျနှံခှငျ့ပွုခဲ့သော ‘အ’ အက်ခရာ ကားမြားမှာ ဇနျနဝါရီ ၁၄ ရကျအထိ အစီးရေ ၅,၁ဝဝ ကြျော အပျနှံခဲ့ပွီး ဖွဈကွောငျး ‘နပွေညျတျော ကညန’မှ သိရသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အတှငျး၌ ‘အ’ အက်ခရာအစီးရေ ၄,၇၅ဝ ရှိရာတှငျ ဇနျနဝါရီ ၁၄ ရကျအထိ အစီးရေ ၃,၆၃၁ စီး အပျနှံခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။ ‘အ’ အက်ခရာကားမြား အပျနှံမှုသညျ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာ အနဖွေငျ့ ၆ဝ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောသှားပွီ ဖွဈသျောလညျး ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျးအပျနှံမှု ပျေါလစီသဈ ထှကျပျေါမလာသေးသောကွောငျ့ ကားဟောငျးစလဈ စြေးမြားလညျး တနျ့နကွေောငျး ကားတငျသှငျးသူမြားထံမှ သိရသညျ။ ယခုရကျပိုငျးအတှငျးဖွဈပျေါနသေော စလဈစြေးကှကျနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကားဝယျ/ရောငျး တဈဦးက “ကားဟောငျးစလဈစြေးတှေ ၉၅ သိနျးဝနျးကငျြမှာ တနျ့နေ တာ တဈလကြျော ကွာသှားပါပွီ၊ ဒီလကုနျအထိ ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး အပျနှံမှု ပျေါလစီအသဈ ထှကျပျေါမလာခဲ့ရငျတော့ စလဈစြေးက သိနျးတဈရာကြျောအထိ မွငျ့တကျသှားဖို့ရှိပါတယျ၊ ‘အ’ အက်ခရာ ပွီးရငျ ‘၁က’ ကားတှကေိုပဲ ချေါမလား၊ နှဈ နှဈဆယျကြျော ကားတှကေိုပဲ ချေါမလားဆိုတာ မသိရတဲ့အတှကျ လုပျရကိုငျရ ကပျြနပေါတယျ”ဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။
GTR Media Co.,Ltd မှ ကွီးမှူး ကငျြးပသော ဒုတိယအကွိမျမွောကျ နှဥေီးအကွိုကားပွပှဲနှငျ့ ကုနျစညျပွပှဲကွီးကို ဖဖေျောဝါရီ ၁၂ ရကျမှ ၁၆ ရကျအထိ ငါးရကျတိုငျတိုငျ ရနျကုနျမွို့၊ ကနျတျောကွီး၊ မြှျောစငျကြှနျးတှငျ စညျကား သိုကျမွိုကျစှာ ကငျြးပပွုလုပျမညျ ဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။ ယငျးပွပှဲကို နံနကျ ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိ ကငျြးပမညျဖွဈပွီး ကားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ပစ်စညျးမြား၊ အထှထှေလေူသုံးကုနျ ပစ်စညျးမြားကို ပွခနျးပေါငျး ခွောကျဆယျ ဝနျးကငျြဖွငျ့ ပွသရောငျးခသြှားမညျဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ Car Showroom အကယျြအဝနျးရှိ မျောတျောယာဉျပွခနျးပေါငျး ခွောကျခနျးတှငျ ဂပြနျကား၊ ကိုရီးယား ကားမြားအပွငျ အခွားကားအမြိုး အစားမြားစှာကို ပွသရောငျးခမြညျဖွဈသညျ။ ပွပှဲတှငျ ပွိုငျကား အပိုပစ်စညျးမြား၊ ကားအလှဆငျ ပစ်စညျးမြား၊ ကားဘကျထရီမြား၊ အငျဂငျြဝိုငျနှငျ့ စကျဆီ၊ ခြောဆီမြား၊ တာယာနှငျ့ အလှိုငျးမြား၊ ကားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ လုပျငနျးမြား၊ အဝတျအထညျမြား၊ စားသောကျကုနျမြား၊ အလှကုနျမြားအပွငျ အခွားကုနျစညျ ပစ်စညျးမြားစှာကို တှဲဖကျပွသ ရောငျးခသြှားမညျဖွဈသညျ။ ပွပှဲနှငျ့အတူ ခမျးနားကွီး ကယျြသညျ့ Fashion Show ကငျြးပပွုလုပျခွငျး၊ ခဈြသူမြားနေ့ အထိမျးအမှတျ အနဖွေငျ့ စုံတှဲမြားနှငျ့ ဂိမျးကစားခွငျး၊ အလိုကျဖကျ ဆုံးစုံတှဲ ရှေးခယျြခွငျး၊ မုနျ့စားပွိုငျပှဲ၊ အနုပညာရှငျစုံတှဲမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး၊ မျောဒယျမြားနှငျ့ လာရောကျကွညျ့ရှုသော ပရိသတျမြားအား အပွနျအလှနျ ပဟဠေိမေးခှနျးမြား မေးမွနျးခွငျးနှငျ့ အခွား စိတျဝငျစားဖှယျရာ ကဏ်ဍမြားစှာဖွငျ့ နစေ့ဉျဖြျောဖွသှေားမညျ ဖွဈကွောငျး GTR Media မှ သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ၌ ပထမဆုံး ကားသဈ၊ ကားဟောငျး လဲလှယျပေးမညျ့ အစီ အစဉျအဖွဈ Future Auto မှ ၆ဂ/ . . .နှငျ့အထကျ ကားမြားကို ကားသဈမြားနှငျ့ လဲလှယျပေးမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ Future Auto အနဖွေငျ့ ပွညျပမှတငျသှငျးလာသညျ့ ကား မြားကို ကမ်ဘောဇဘဏျနှငျ့ ခြိတျဆကျကာ အရဈကစြနဈဖွငျ့ ရောငျးခပြေးနသေကဲ့သို့ ကားသဈနှငျ့ ကားဟောငျး လဲလှယျမညျ့အစီအစဉျတှငျလညျး လဲလှယျလိုသညျ့ကား အမြိုးအစားမှာ အလိုကျပေး လဲလှယျရမညျ့ကားဖွဈပါက ဘဏျအရဈကစြနဈဖွငျ့ ဝနျဆောငျမှုပေးမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ကားသဈ၊ ကားဟောငျး လဲလှယျပေးမညျ့ ဝနျဆောငျမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ Future Auto မှ မနျနဂေငျြးဒါရိုကျတာ ကိုဇယြောစိုးက “Customer တှအေနနေဲ့ စီးပွီးသားကားတှကေို အသဈနဲ့လဲခငျြလို့ အပွငျမှာရောငျးရငျ အခကျအခဲတှေ ရှိနိုငျပါတယျ၊ ပှဲစားပါရငျလညျး ပှဲစားခ ပေးရမှာဖွဈပါတယျ၊ Future Auto အနနေဲ့ ကားသဈနဲ့ ကားဟောငျး လဲလှယျခငျြတဲ့ Customer တှအေတှကျ စြေးလညျး မနဈနာရအောငျ၊ တခွားအခကျအခဲတှလေညျး မရှိအောငျလို့ အကောငျးဆုံး ဝနျဆောငျမှုပေးမှာ ဖွဈပါတယျ”ဟု ပွောကွား ခဲ့သညျ။ Future Auto အနဖွေငျ့ ကားသဈမြား ရောငျးခရြာတှငျ Warranty ခွောကျလပေးပွီး ရောငျးခပြေးနသေျောလညျး လဲလှယျသညျ့ ကားဟောငျးမြားကို ပွနျလညျရောငျးခရြာတှငျ Warranty ပေးမညျ မဟုတျကွောငျး သိရသညျ။
၂ဝ၁၄ ခုနှဈ နှဈဆနျးပိုငျးအတှငျး ပွညျပမှ မျောတျောယာဉျမြား တငျသှငျးရာတှငျ ယာဉျ/ယန္တရားစာရငျး၌ Mini Bus နှငျ့ Mini Truck အမြားဆုံးပါဝငျကွောငျး ‘စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ကုနျသှယျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန၊ သှငျးကုနျ/ထုတျကုနျ လုပျငနျးဌာနခှဲ’ မှ သိရသညျ။ ဇနျနဝါရီလဆနျးပိုငျး၌ ယာဉျ/ယန္တရား လြှောကျထားမှုစာရငျးတှငျ အစီးရေ ၁,၅၂၈ စီး ပါမဈလြှောကျထားခဲ့ပွီး Mini Bus၂၅၁ စီး၊ Mini Truck ၄ဝ၇ စီး၊ Light Truck ၄၂၃ စီးအပါအဝငျ Prime Mover ၊ Space Cab ၊ Pcik Up ၊ Double Cab ကားမြား ပါဝငျခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ ဇနျနဝါရီ ၂ ရကျမှ ၁၄ ရကျအထိ လူစီးဆလှနျးမြား၊ ဝကျဂနျမြားနှငျ့ ထရပျကား၂၁၇ စီးကိုလညျး ပါမဈထုတျပေးခဲ့ကွောငျး ‘ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန’ မှ သိရသညျ။ ယခုလအတှငျး ပါမဈထုတျပေးခဲ့သညျ့ လူစီးယာဉျမြားထဲ၌ Toyota ၊ Honda ကားမြား အမြားဆုံး ပါဝငျခဲ့ပွီး Mazda ၊ Nissan ကားမြားလညျး ပါဝငျခဲ့သညျ။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘဏ်ဍာနှဈအစဖွဈသညျ့ ၂ဝ၁၃ ခုနှဈ၊ ဧပွီလမှ ယခုနှဈ ဇနျနဝါရီ ၁၄ ရကျ အထိ လူစီးယာဉျ၊ Truck နှငျ့ Bus ၁၇,၂၄၃ စီးကို ပါမဈထုတျပေးခဲ့ရာ တနျဖိုး အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၂ဝ,၄၆၄,၈၁ဝ ရှိခဲ့ကွောငျး အဆိုပါ ဌာနမှ သိရသညျ။
ပွညျလမျးမကွီးပျေါရှိ ဟံသာဝတီအဝိုငျးတှငျ ယာဉျကွောကပျြတညျးမှု ဆိုးရှားစှာ ဖွဈပှားနသေညျ့အတှကျ အဝိုငျးပတျစနဈအစား မီးပှိုငျ့စနဈ အသုံးပွုရနျ သငျ့မသငျ့ အခြိနျ ငါးလခနျ့ယူ၍ စဈတမျး ကောကျယူမှုမြား ပွုလုပျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ‘ရနျကုနျမွို့တျော စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ၊ အငျဂငျြနီယာဌာန(လမျး၊ တံတား)’မှ သတငျးရရှိသညျ။ ယခငျကတညျးက ယာဉျကွောကပျြတညျးမှု အနညျးငယျ ဖွဈပျေါလရှေိ့ပွီး အဝိုငျးအနီးရှိ စိုကျပြိုးရေးမှတျတိုငျနှငျ့ အဝိုငျးမှတျတိုငျတှငျ ခရီးသညျတငျယာဉျမြား နှဈထပျရပျ၍ ခရီးသညျအတငျအခြ ပွုလုပျခွငျး၊ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ခရီးသညျစောငျ့ဆိုငျးခွငျးတို့အပွငျ လှညျးတနျးခုံးကြျောတံတား ဖှငျ့လှဈ အသုံးပွုပွီးနောကျပိုငျး ယာဉျကွောကပျြတညျးမှု ပိုမိုမွငျ့မားလာရာ အဝိုငျးပတျစနဈကို ဖွုတျသိမျးရနျနှငျ့ မီးပှိုငျ့စနဈအသုံးပွုရနျ သငျ့မသငျ့ စဈတမျးကောကျယူ လလေ့ာမှုမြား ပွုလုပျရနျ စီစဉျရခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “လှညျးတနျးတံတား အဆငျးကလာတဲ့ ကားတှရေယျ၊ ဆူးလေ၊ မွနေီကုနျးဘကျကလာတဲ့ ကားအစီးရေ မြားတာရယျ၊ ဘတျဈကားတှရေဲ့ စညျးကမျးမရှိမှုတှရေယျကွောငျ့ အဝိုငျးမှာ ယာဉျကွောကပျြတာက ဆိုးလာတယျ၊ ရှဈမိုငျမှာတော့ ဆငျဆာစနဈသုံး မီးပှိုငျ့ကွောငျ့ တျောတျော အဆငျပွသှေားတယျ၊ အဲဒါကွောငျ့ အဝိုငျးကိုလညျး ဒီလိုလုပျဖို့ စဉျးစားမိတာ၊ အဆငျပွေ မပွတေော့ စဈတမျး ကောကျပွီးမှသိမယျ”ဟု ‘မွို့တျော စညျပငျ၊ အငျဂငျြနီယာဌာန(လမျး၊ တံတား)’ မှ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးမြိုးလှငျက ပွောသညျ။ ဟံသာဝတီအဝိုငျးကို အဝိုငျးပတျစနဈ ဖွုတျသိမျး၍ မီးပှိုငျ့စနဈ တပျဆငျအသုံးပွုရနျ စဈတမျးကောကျယူမှုကို ယခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှ မလေအထိ ပွုလုပျသှားမညျဖွဈပွီး မီးပှိုငျ့စနဈ အသုံးပွုမညျဆိုပါက အသုံးပွုသှားမညျ့ မီးပှိုငျ့ဒီဇိုငျး ရေးဆှဲခွငျးနှငျ့ မီးပှိုငျ့၌ ဆငျဆာစနဈအသုံးပွုခွငျး သငျ့ မသငျ့တို့ကို လုပျဆောငျသှားမညျဟု သတငျးရရှိသညျ။
သီလဝါဆိပျကမျးမှတဈဆငျ့ ရနျကုနျမွို့တှငျးသို့ လာရောကျမညျ့ ကုနျစညျတငျယာဉျမြားယာဉျ ကွောကပျြတညျးမှု လြော့ကစြရေနျ သာကတေ မွဈကူးတံတားသဈ တဈစငျး ယခုနှဈအတှငျး တညျဆောကျမညျ ဖွဈကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့၊ ပို့ဆောငျရေးဝနျကွီး ဦးအောငျခငျက ဇနျနဝါရီ ၁၄ ရကျ၊ ရနျကုနျမွို့၊ Asia Plaza ဟိုတယျတှငျ ကငျြးပသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ၌ ပွောကွားခဲ့သညျ။ အဆိုပါ တံတားသဈအား ပုဇှနျတောငျမွို့နယျနှငျ့ ဒေါပုံမွို့နယျတို့ကို ခြိတျဆကျ တညျဆောကျသှားမညျ ဖွဈပွီး ရနျကုနျမွို့ပွ သယျယူပို့ဆောငျရေး စီမံကိနျးရေး ဆှဲရေးအဖှဲ့(YUTRA) မှ စဈတမျးကောကျယူနကော ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာနမှ အကောငျအထညျဖျော တညျဆောကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “ရနျကုနျမွို့ပွဖှံ့ဖွိုးရေး အတှကျ ရေးဆှဲထားတဲ့ နှဈအလိုကျ စီမံကိနျးတှထေဲက အခု ၂ဝ၁၄ ဆိုရငျ ရှဈမိုငျ၊ မွနေီကုနျးမီးပှိုငျ့တှမှော အခကျြပွစနဈတှပွေောငျးပွီး တပျဆငျဖို့နဲ့ သာကတေတံတားသဈ တညျဆောကျဖို့ ရှိပါတယျ၊ သီလဝါဆိပျကမျးဘကျကလာမယျ့ ကုနျစညျတှေ ကူးသနျးပို့ဆောငျတဲ့အခါ ယာဉျမကပျြအောငျပါ၊ အဓိက ရညျရှယျတာကတော့ ကုနျစညျတငျယာဉျတှပေဲ၊ ၂ဝ၁၅ ဆို ရငျ ကုနျစညျတငျယာဉျတှေ ပိုမြားလာမယျ၊ ဒီအတှကျ ကွိုတငျပွငျ ဆငျထားတာပါ” ဟု ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ ပို့ဆောငျရေး ဝနျကွီး ဦးအောငျခငျကပွောသညျ။ ယခု ထပျမံတညျဆောကျမညျ့ မွဈကူးတံတားသဈ တညျဆောကျရေးအတှကျ စဈတမျးကောကျယူမှုမြားကို ဖဖေျောဝါရီလတှငျ အပွီး သတျဆောငျရှကျသှားမညျဟု သိရသညျ။ “အရငျက တညျဆောကျထားတဲ့ မွဈကူးတံတား အမြားစုက တံတားခံနိုငျရညျ တနျ ခွောကျဆယျ လောကျပဲရှိတယျ၊ အခု ဆောကျမယျ့တံတားက ကုနျစညျတငျယာဉျတှကေို ရညျရှယျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ အနညျးဆုံး ခံနိုငျရညျ တနျကိုးဆယျနဲ့ အထကျကိုပဲ တညျဆောကျမှာပါ”ဟု ‘ရနျကုနျ မွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီ၊ အငျဂငျြနီယာဌာန(လမျး၊ တံတား)’မှ ဒုတိယဌာနမှူးက ပွောသညျ။
၂ဝ၁၃ ခုနှဈ၊ မလေတှငျ စတငျ ဖောကျလုပျခဲ့သော အောငျမင်ျဂလာ လမျးမကွီးမှာ ဒီဇငျဘာလအတှငျး ပွီးစီးရနျ သတျမှတျထားသျောလညျး ၂ဝ၁၄ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ အထိ ပွီးစီးမှုမရှိသညျ့အတှကျ အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးဝငျး အတှငျး ယာဉျကွောကပျြမှုဆကျလကျ ဖွဈပှားလကျြရှိပွီး ယာဉျအဝငျ၊ အ ထှကျနရောမြား၌ အခကျအခဲမြား ဖွဈပှားလကျြရှိကွောငျး ယာဉျမောငျးမြားနှငျ့ ခရီးသညျမြားထံမှ စုံစမျး သိရသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့နှဈအတှငျး အောငျမင်ျဂလာ အဝေးပွေးဝငျးအတှငျးရှိ လမျးပေါငျး နှဈဆယျ ပွုပွငျခငျး ကငျြးခွငျးနှငျ့ ဆိုကျရောကျ/ ထှကျခှာ အဆောကျအအုံ တညျဆောကျ ခွငျးမြားကွောငျ့ ဝငျးအတှငျး ယာဉျအဝငျအထှကျ ဂိတျပေါကျမြား ပွောငျးလဲခဲ့ရပွီး ယခုအခါ အဓိက ယာဉျဝငျ/ထှကျပေါကျအဖွဈ အသုံး ပွုနသေော အောငျမင်ျဂလာလမျးမကွီးမှာလညျး သတျမှတျကာလအတှငျး ပွီးစီးမှုမရှိသောကွောငျ့ ယာဉျကွောကပျြမှု ပွဿနာ ဆကျလကျ ဖွဈပှားနရေကွောငျးနှငျ့ သုဓမ်မာလမျးမကွီးကို အသုံးပွုနရေသော ခရီးသှားမှာလညျး အခကျကွုံ နရေကွောငျး သိရသညျ။ “အဝေးပွေးဝငျးမှာ ပိတျနတေော့ သုဓမ်မာလမျးတဈလြှောကျလညျး ပိတျတာပဲ၊ မွို့ထဲလညျး ပိတျ၊ မွို့ပွငျပိတျ၊ ဘယျနရောမဆို ပိတျနတေော့ ခကျတာပါပဲ၊ ဒါပမေဲ့ ဒါက မနကျပိုငျးနဲ့ ညနပေိုငျးပိတျတာ၊ ရုံးတကျ/ရုံးဆငျး၊ ကြောငျး တကျ/ကြောငျးဆငျးခြိနျကွီး ပိတျ နတေော့ အဆငျမပွဘေူး၊ တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှကေ ကိစ်စမရှိပမေဲ့ ရုံးသမားတှကေ ဒုက်ခအရမျး ရောကျတယျ”ဟု မင်ျဂလာဒုံမွို့နေ မဥမ်မာက ပွောသညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ မွို့တျောစညျပငျ(အခှနျဌာန)မှ ဌာနခှဲမှူး ဦးဇျောမငျးက “ရမွေောငျး ပွငျဆငျမှုနဲ့ လမျးမတဈလြှောကျ ကားရပျနားနရောတှေ ထညျ့သှငျး တညျဆောကျနရေတဲ့ အတှကျပါ၊ အရငျလမျးဟောငျးကို ပွုပွငျခငျးကငျြးရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အခကျအခဲတော့ ရှိပါတယျ၊ လမျးခြဲ့မယျ့ နရောက ကနျစှနျးခငျး အဟောငျး တှဆေိုတော့ မွဖေို့တာကိုလညျး တျောတျောလေး လုပျခဲ့ရတယျ၊ အ ခုက ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျးပွီးနပေါပွီ၊ မကွာခငျဖှငျ့နိုငျမှာပါ၊ တဈခွမျးခငျး စနဈနဲ့ သှားရတဲ့အတှကျယာဉျကွော ပိတျတာတော့ အနညျးငယျတော့ရှိ မှာပါ”ဟု ပွောသညျ။ အဝေးပွေးခရီးသညျတငျ ကားကွီးမြားနှငျ့အငှားယာဉျမြား အဓိက အဝငျ/အထှကျ ပွုလုပျနရေသညျ့ အောငျမင်ျဂလာလမျးမကွီးမှာ ၁/၇၈ ၅ ပေ ရှညျလြားကာ ၇၂ ပကေယျြဝနျးပွီး လကျရှိတှငျ ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ပွီးစီးမှုရှိကွောငျး၊ အောငျမင်ျဂလာ အဝေးပွေးဝငျးအတှငျး၌ အောငျမင်ျဂလာလမျး ခငျးကငျြးမှုအပွငျ ကားလကျမှတျ အရောငျးဂိတျခနျးမြား ဆောကျလုပျမှု၊ ဝငျးအတှငျးရှိ လမျးနှဈဆယျ ခငျးကငျြးမှုနှငျ့ ဝငျးအပွငျတှငျ လေးလမျးသှား လမျးမကွီး ခငျးကငျြး ဆောကျလုပျမှုမြား ရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။
ယခုနှဈဦး ရကျသတ်တပတျ နှဈပတျတာ ကာလအတှငျး စညျးကမျးမဲ့ ယာဉျရပျနားမှုပေါငျး ရှဈရာကြျောအထိ ဖမျးဆီးအရေးယူနိုငျခဲ့ကွောငျး ‘အမှတျ-၂ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး’မှ သတငျးရရှိသညျ။ ရနျကုနျမွို့တှငျး စညျးကမျးမဲ့ ယာဉျရပျနားမှု လြော့ကစြရေနျ ၂ဝ၁၃ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျမှ စတငျ၍ မွို့တှငျး လမျးမကွီးမြားပျေါ၌ ယာဉျရပျနားမှုမြားအား ကွညောခကျြမြား ထုတျပွနျကာ ဖမျးဆီးအရေးယူခွငျးမြား ဆောငျ ရှကျခဲ့ပွီး ၂ဝ၁၄ ခုနှဈ၏ ၁၄ ရကျတာ ကာလအတှငျး၌ စညျးကမျးမဲ့ ရပျနားထားသညျ့ ယာဉျအစီးရေ ရှဈရာကြျော ဖမျးဆီးအရေးယူခဲ့ကွောငျး၊ အဆိုပါ အရေးယူမှုမြားတှငျ ကရိနျးဖွငျ့ဆှဲယူခဲ့သညျ့ ယာဉျ ၁၈ဝ ကြျောနှငျ့ ခလြနျဖွတျ အရေးယူခဲ့သညျ့ ယာဉျ ၆၅ဝ ခနျ့အထိ ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။ “ယာဉျကွောတှေ ရှငျးလငျးဖို့အတှကျ အရေးယူ ဆောငျရှကျတာတှကေို အဖှဲ့လေးဖှဲ့ခှဲပွီး လှညျ့လညျစဈဆေး ဖမျးဆီးနပေါတယျ၊ ယာဉျမောငျးသူတှနေဲ့ လမျးအသုံးပွုသူတှေ စညျးကမျးကို စနဈတကလြိုကျနာမယျ၊ ဖမျးဆီးဆောငျ ရှကျရတဲ့ အမှုတှေ လြော့နညျးလာမယျဆိုရငျ တိုငျးပွညျ ဂုဏျတကျစတောပေါ့”ဟု အမှတျ-၂ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့ခှဲမှူးရုံးမှ တာဝနျရှိသူ တဈဦးက ဆိုသညျ။ ယာဉျမရပျရ သတျမှတျနရော မြား၌ ယာဉျရပျနား၍ ဖမျးဆီး အရေးယူခွငျးခံရပါက ကရိနျးနှငျ့ ဆှဲယူသညျ့ယာဉျဖွဈလြှငျ ငှကေပျြ တဈသိနျးခှဲခနျ့ ကုနျကမြညျဖွဈပွီး ခလြနျဖွတျအရေးယူပါက ယာဉျ မောငျးအား ဒဏျငှေ ကပျြ နှဈသောငျးခှဲ ဒဏျရိုကျ အရေးယူလကျြရှိကာ ယငျးမှာ စညျပငျဥပဒေ ပုဒျမ ၆၈ အရ ဒဏျရိုကျအရေးယူ ဆောငျရှကျခွငျး ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ စညျးကမျးမဲ့ ယာဉျရပျနားမှုမြားကို စဈဆေးဖမျးဆီး အရေးယူခွငျးမြား စတငျဆောငျရှကျခဲ့သညျ့ ၂ဝ၁၃ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျမှ ၂ဝ၁၄ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီ ၁၄ ရကျအထိ အမှုပေါငျး ၃,ဝ၅၆ မှု ရှိခဲ့ပွီး ယငျးတှငျ ကရိနျးဖွငျ့ ဖမျးဆီးအရေးမှု ၆၈၃ မှု၊ ခလြနျဖွတျ အရေးယူမှု ၂,၃၇၃ မှုအထိ ရှိကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။